တွေးမိတွေးရာ...... .ရေးမိရေးရာ စာများ.: 2006
Myo Kyawt Myine
မရောက်တာ အတော်ကြာလှပြီ ဖြစ်တဲ့ လမ်းအိုလေးကို ဘာရယ်မဟုတ် သည်နေ့ နည်းနည်း အားတာနဲ့ ၀င်ကြည့်ရင်း မျိုးကျော့မြိုင်ရဲ့ စာ တစ်စ တွေ့လို့ ဖတ်မိတယ်..။ စာကြီးစာကျယ်ကြီးမဟုတ်ပေမယ့် .. ကိုယ်သဘောကျမိလို့.. မျှဝေချင်ပါတယ်။ သူကြုံခဲ့တဲ့ ဘ၀၊ သူမှားခဲ့တဲ့ အမှားများနဲ့ သူ့ကိုယ်သူ နှစ်သိမ့်ပုံလေးတွေ..။
ငယ်ရွယ်သူတွေ ဟာ နုပျိုတဲ့ အချိန်တွေကို ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတာပါပဲ..
နေမင်းကြီးဟာ ကိုယ့်ရဲ့ဘ၀ ပထမဆုံးနေ့ကို ခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။
ညရောက်တော့ လမင်းကြီးက ကိုယ့်ကို ဖမ်းညို့ထားတယ်။
လေတွေ တိုက်နေတဲ့ကြားမှာ မိုးရေစက်တို့ရဲ့ လွှမ်းခြုံခြင်းနဲ့
လမ်းတွေက ကိုယ့်ကို နေရာပေါင်းများစွာပို့ခဲ့တယ်။
ဖြစ်ချင်တာကို ရအောင်လုပ်မယ် ဆိုပြီး
အရာရာညကို ဂရုမစိုက်ဘဲ ရှေ့ဆက်ခဲ့တယ်။
ပျော်စရာတွေ အများကြီး ရသလို
ဘေးနားမှာရှိတဲ့ အဖော်တွေေနဲ့ ဝေးသွားရလောက်အောင်
နေမင်းကြီးကိုလည်း အရင်လို ဂရုမစိုက်တတ်တော့ဘူး..
လေတွေ တိုက်တဲ့အချိန်၊ ဒါမှမဟုတ်
ညတွေ နေ့တွေကို ကျော်ဖြတ်နေမိတော့တယ်
ဒီလိုနဲ့ပဲ ဘ၀ရဲ့ ဒုတိယအရွယ်ကို ရောက်ခဲ့ရတယ်..။
အရာရာကို သိပ်အားမရှိပေမယ့် ခံနိုင်ရည်ရှိအောင်
လုပ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ အားလုံးကိုလည်း
အဲလိုနဲ့ပဲ အမှားနည်းအောင် ကိုယ်နေတတ်လာတယ်။
ပြန်မရနိုင်တော့မယ့် အဖော်ဆိုတာကိုလည်း သတိရနေမိတယ်..
အရင်လို အင်အားတွေ လိုချင်နေမိတယ်။
နေမင်းကြီး ထွက်မယ့် အချိန်ကို စောင့်တတ်လာတယ်။
လေတွေ တိုက်နေတဲ့ ညနေခင်းတွေကို
အဲဒီအချိန်မှာပဲ ကိုယ်တစ်ခု သေချာစွာ သိလိုက်ရတယ်..။
ကိုယ့်ဘ၀မှာ ဘယ်အရာတွေ ဘယ်လိုပဲ ဆုံးရှုံးဆုံးရှုံး
သီချင်းတေဗွ ဟာ ကိုယ့်နားမှာ
ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံးနဲ့ အမြဲရှိနေတုန်းပဲ
ကိုယ့်ကို အင်အားတွေ ပေးနေတုန်းပဲ
အကြိမ်ကြိမ် ကယ်တင်နေတုန်းပဲ ဆိုတာ...
ဒီလိုပါပဲ.. ငယ်ရွယ်သူတွေဟာ နုပျိုတဲ့ အချိန်တွေကို ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတာပါပဲ..။
Posted by Maw at 5:58 AM0comments
ငါဟာ တစ်ဝက်-တစ်ဝက် ကိုပဲ တွေ့လိုက်ရ
ကြည့်စမ်း ပဉ္စလက်စကားဆန်း (တစ်ဝက်)..တဲ့
အရင်ကထက် ပျော်ရွှင်မှုတွေ ပိုင်စေမှာ
ဘ၀မှာ အကောင်းဆုံး အခြေအနေပါ။
ကောင်းကင်နဲ့ မြေကြီးကြားမှာ ရှိနေတာ
မြို့ပြနဲ့ ကျေးလက်ကြား ခရောစီးးတစ်ဝက်မှာ အခြေချပါ
ပညာရှာပါ..၊ ပညာရှိလို့ (တစ်ဝက်ပဲနေပါ)
စီးပွားရှာပါ..၊ တစ်ဝက်ရရင် ပြည့်စုံပါ
အိမ်တစ်ဝက်ကို ခမ်းခမ်းနားနား ပြင်ဆင်ပါ
ကျန်တဲ့ တစ်ဝက်ကို ရောစိးုးရိုးစင်းစင်း ခင်းကျင်းပါ
ရွက်တစ်ဝက် ဖွင့်လှော်တဲ့ ရွက်လှေသာ
ဗုဒ္ဓတစ်ဝက်၊ တာအိုတစ်ဝက် ခံစားချက်နဲ့
ဘ၀ဆိုတာ အချိုတစ်ဝက် အခါးတစ်ဝက်
Posted by Maw at 2:28 AM2comments
Unsafe abortion .... why..??? (ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဧ။် မှတ်စုများ မှ)
လူနာကို နှာခေါင်းပိုက် တည့်သည့်အချိန်မှ စ၍ ဆရာဝန် ဆရာမတွေ အံ့သြတုန်လှုပ်ကြရပါသည်။ နှာခေါင်းမှ တဆင့် အစာအိမ်ထဲရှိ အစာနှင့် အညစ်အကြေးများကို ပိုက်ဖြင့် စုပ်ယူသည့်အခါ ရလာသည့် အရာများကို ကြည့်ပြီး ကျွန်မတို့လန့်သွားသည်ပဲ ဆိုကြပါစို့။
နှာခေါင်းပိုက်ထဲက ရလာသည့် အရောစးည်ပျစ်ပျစ်များသည် ညိုညစ်ညစ် အရောင်ရှိကာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး နံစော် လှသည်။ ထိုအနံ့သည် ပုပ်ဟောင်သည့် အနံ့နှင့် မစင်နံ့စော်လှသည်။ ထိုအနံ့သည် ပုပ်ဟောင်သည့်အနံ့နှင့် မစင်နံ့ရောထား သည့် အနံ့ဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲ၊ လူနာ၏ အစာအိမ်မှာ သည်မစင်နံ့ရှိသည့် အညစ်အကြေး ရည်တွေဟာ ဘာကြောင့်ရှိနေရတာလဲ။ နှာခေါင်းပိုက်ဟူသည် အစာအိမ်ထဲမှတစ်ပါး အခြား မည်သည့် ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းဆီမှ ရောက်နိုင်ခြေမရှိတာ အထင်အရှားပဲ။ သို့ပါလျက် ရလာသည့် အညစ်အကြေးက အစာအိမ်ထဲက အညစ်အကြေးနံ့ဖြစ်နေသည်။
အဲသည်အချိန်ကစပြိး လူနာနှင့် ပတ်သတ်သည့် အကြောင်းအရာသည် ပြဿနာတစ်ရပ် အဖြစ် ကျွန်မ အာရုံထဲသို့ စတင် ၀င်ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။
သို့သော် အချို့ ကိစ္စများမှာတော့ အဲသည်လို မဟုတ်ပေ။ လူနာကို ကုသညပီးနောက်မှ လူနာနှင့် ပတ်သတ်သည့် အတွေးတို့က ခေါင်းထဲဝင်လာနေတတ်တာမျိုးလည်း ရှိသည်။ ထိုအခါမျိုးတွင် ကျွန်မသည် သီးသန့်မှတ်စုစာအုပ်တစ်ခုတွင် လူနာနှင့်ပတ်သက်သည့် အတွေး သို့မဟုတ် ပြဿနာကို ရေးမှတ် ရတတ်သည်။ ယခုလူနာမှာ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချရာမှ သွေးဆိပ်သင့်အဖျား (epticemia) ရောဂါ ခံစားနေရသည့် အမျိုးသမီးလူနာတစ်ယောက် ဖြစ်သည်။
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းသည် တရားဥပဒေကို ချိုးဖောက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ရာဇသတ်ကြိး ပုဒ်မ ၃၁၂ ဖြင့် ငြိသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချသူ လူနာတို့သည် ပြည်သူ့ဆေးရုံနှင့် မပတ်သတ်လိုကြပေ။ အသက် အန္တရယ် စိုးရိမ်ရလောက်အောင် နောက်ဆက်တွဲ နာမကျန်းမှု ဒုက္ခ တွေကို ကြုံတွေ့လာရမှ ဆေးရုံသို့ ရောက်လာတတ်ကြသည်။ ဒါတောင်မှ အရှက်နှင့် အသက် ဟူသည့် ဘယ်တုန်းက စြီပီးပေါ်ပေါက်ခဲ့မှန်း မသိသည် ရွေးချယ်မှုကြီးတစ်ခုကို တချို့က လက်ကိုင်ထားနေတတ်သေး၏။ "အသက်သာ အသေခံမယ်၊ အရှက် ကွဲ မခံနိုင်ဘူး" ဆိုတာမျိုးဖြင့် ခေါင်းမာသည့် ကိစ္စတွေ ရှိတတ်သေး၏။ "အရှက်" ဆိုသော အရာတွင် မိမိက ဘယ်လောက် အကျုံးဝင်နေသလဲ၊ အဲသည် "အရှက်" ၏ အလေးအပေါ့၊ အတိမ်အနက် နှင့် မိမိနှင့် သက်ဆိုင်နေသည့် တာဝန် ဘယ်လောက်ရှိနေလို့လဲ၊ အဲသည် အရှက်၏ အဓိက တရားခံမှာ မိမိ တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်နေလို့ မိမိက လူမသိ သူမသိ အသေခံရမှာလား.. စသည် .. စသည်.. အတွေးများကို မြန်မာအိမ်ထောင်စုများ တွေးလေ့မရှိကြပေ။
အရှက်ကွဲမခံရချင်၍ အသက်အသေခံသွားရသည့် မိန်းမတွေ ဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲ။ ဤ ကိစ္စတွင် လူနာရှင် သို့မဟုတ် ဆွေမျိုးသားချင်းတို့၏ တတ်သိလိမ်မာစွာ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်း တတ်မှု အများကြီး လိုအပ် ပါသည်။
ကျွန်မတို့နယ်လှည့်ဆေးကုသသည့် အစီအစဉ်တစ်ခုကို အလျဉ်းသင့်သလို မကြာခဏ ပြူလုပ်ဆောင်ရွက်လေ့ ရှိကြသည်။ ကျွန်မတို့ အဖွဲ့မှာ ဆေးရုံက ကလေးအထူးကု ဆရာဝန် ပါသည်။ သမားတော် ပါသည်။ မီးယပ် သားဖွား အထူကု ဆရာဝန် ပါသည်။ ဆေးရုံတွင် အခါအားလျော်စွာ လုပ်အားပေးဆရာဝန် အဖြစ် တာဝန် ယူလေ့ရှိသည့် ပြင်ပဆေးကုဆရာဝန် ကျွန်မပါသည်။ မြို့နယ်စု အတွင်း ရွာသိမ် ရွာမွှားလေးတွေအထိ ခရီးစဉ် ချ၍်ျ သွားရောက်ကုသ ပေးလျက် ရှိရာရွာသေးသေးကလေး တစ်ခုမှ အသက်အန္တရယ် အခြေအနေ အထိ ရောက်နေပြီဖြစ်သော ယခုလူနာကို မရည်ရွယ်ဘဲ သွားကြည့်ခွင့် ရခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
လူနာရှင်က လာပင့်ခေါ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ လူနာ၏ အသိ မိတ်ဆွေတစ်ဦးက ကျွန်မတို့ ဆေးကုရာ စခန်းသို့ ရောက်လာပြီး သတင်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဆရာမကြီးတို့ရယ်.. ရွာတောင်ဖျားမှာ ငန်းဖမ်းပြီး ကယောင်ကတမ်း ဖြစ်နေတဲ့ ကလေးမလေးတစ်ယောက်ရှိပါသတယ်တော်။ ဟိုဘက်သည်ဘက်တောင် မစောင်းနိုင်တော့ပါဘူး။ ကြုံရင် လိုက်ကြည့်ပေးပါ။ ကလေးမလေးက အသက်အငယ်လေး ရှိသေးတာ။
"လှည်းဆောင့်လိုက်ရင် တစ်ချက်တည်း အသက်ထွက်မှာပဲ" ဟု သူက ထင်မြင်ချက်ပေး၏။ ဆိုလိုသည်ကွှဤဆေးခန်းသို့ လာရောက်ဖို့ အခြေအနေ မရှိဘူးပေါ့။ ကျွန်မတို့အတွက်က လူနာတစ်ယောက်ကို သွားကြည့်ပြီးကုသပေးဖို့ ဘာအခက်အခဲ ပြဿနာမှ မဖြစ်ပါ။ သူတို့ကို ကုသပေးလို၍ပဲ မြို့ပေါ် ဆေးရုံကြီးမှ ဝေးလံသော ဤျရွာကလေးအထိ ရောက်ခဲ့ပြီးပြီ မဟုတ်လား.. သွားကြည့်ကြတာပေါ့။
လူနာရှိရာ အိမ်အတွင်းခန်းသည် ထိုအိမ်၏ တစ်ခုတည်းသော အခန်းဖြစ်၏။ လူနာသည် ဖျာကြမ်း စောင်နွမ်းနွမ်းပေါ်မှာ လဲလျောင်းလျက် ရှိသည်။ ဘ၀ကူးကောင်းစေရန် ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အနီးမှာ အမျိုးသမိးကြီး နှစ်ယောက်က ထိုင်ပြီး ဘုရားစာများ ရွတ်ဖတ်နေကြသည်။
ထိုမျှော်လင့်ချက်ကလေးကို အာမခံ မပေးနိုင်သည့် အခြေအနေပဲရှိသေးသည်မို့ ကျွန်မ ဖျက်ခနဲ မျက်နှာလွဲကာ လူနာကိုပဲ သတိထား၍ ကြည့်လိုက်ရသည်။
ကျွန်မကပဲ ရာထူးအငယ်ဆုံးဖြစ်သည်မို့ လူနာကို စမ်းသပ်ပါသည်။ အဖျားဒီကရီ ၁၀၄။ နှုတ်ခမ်းများ ခြောက်သွေ့ကာ ရေဓာတ်နည်းပါးနေသည်။ သတိရတစ်ချက် မရတစ်ချက် ဖြစ်နေတာ ညနက်ပိုင်းမှ စပြီး ယခု တစ်မနက်လုံးဟု လူနာ၏ မိခင်က အသိပေးသည်။ လူနာ၏ ၀မ်းဗိုက်ကို ကြည့်မိတော့ ဗိုက်မှာ ဖောင်းပြီး တင်းနေသည်။ ၀မ်းဗိုက်အောက်ပိုင်းကို ကျွန်မ လက်ဖြင့် စမ်းသပ်တော့ လူနာတစ်ချက် လွန့်ခနဲ တော့ ဖြစ်သွားသည်။ ထဘီကို အောက်အထိ ဆွဲချလိုက်သောအခါ လူနာထံမှ ရသည့် သွေးနံ့ရောသည့် အနံ့အသက်တစ်ခုကို သိသိသာသာ ရလိုက်သည်။
လူနာ၏ အဖျားဒီဂရီ၊ အနံ့အသက်၊ ၀မ်းဗိုက်တင်းမာမှု စသည်တို့ကို တွက်ဆပြီး စစ်ဆေးလိုက်သောအခါ ဖြစ်နိုင်ဆုံးရောဂါ သုံးလေးခုပဲ ရှိသည်။ လူနာ၏ မိခင်ကို ကျွန်မ မျက်နှာရိပ် မျက်နှာကဲဖြင့် ခေါ်ယူကာ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခဲ့သလား ဟု ခပ်တိုးတိုး တိုက်ရိုက်မေးလိုက်သည်။
ရိုးအအ ပညာမဲ့သည့် တောရွာသူ အခေါ်ကြီးသည် ချက်ချင်းပင် ချုံးပွဲချ ငိုလိုက်လေသည်။
လူနာကို ဆေးရုံထိ သယ်ပြိး ကုသဖို့ လမ်းခရီးဒဏ် နှင့် အချိန်ကာလဒဏ်ကို လူနာ ခံနိုင်ပါ့မလား။ လမ်းခရီးမှာ တစ်ခုခု ဖြစ်သွားလျှင် ကျွန်မတို့အပေါ်ရွာက ဘယ်လို သဘောထားမလဲ။ ဆေးရုံအထိအရောက် လူနာ အသက်ရှင်နေဦးမည် ဟု ကျွန်မတို့ကို ဘယ်တန်ခိုးရှင်က အာမခံပေးနိုင်ပါ့မလဲ။
သို့သော် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားမည် ဟူသည့် စိတ်ဆန်ဒဖြင့် လုပ်လျှင်လုပ်၊ မလုပ်လျှင် သေ အခြေအနေအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက် ချက်ချင်းချလိုက်ကြသည်။
လိုအပ်သည့် ဆေးဝါးတို့ သွင်းပေးလျက် လူနာကို ဆေးရုံသို့ သယ်ဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။ ဆေးရုံသို့ ရောက်ရေက်ချင်းပဲ ခွဲစိတ်မှုကို ခံနိုင်ရန် အဆင်သင့်ဟူသည့် အခြေအနေမျိုးရလာဖို့ လိုအပ်သမျှ ကုသမှု အဆင့်ဆင့် ပြုလုပ်ကြရသည်။ နှာခေါင်းပိုက် မှ ရလာသည့် အညစ်အကြေးရည်ကို မြင်ရသမျှတော့ လူနာ အခြေအနေ မကောင်းပါ။
မီးယပ်သားဖွား အထူးကု ဆရာဝန်က သူနှင့် သက်ဆိုင်သည့် လူနာအောက်ပိုင်းကို စမ်းသပ်သည့်အခါ အများစုသော ကိုယ်ဝန်ဖျက် လူနာများ အတိုင်းပဲ တစုံတခု ချွန်ထက်သော အရာဖြင့် ထိုးဆွပြီး ကိုယ်ဝန်ကို ဖျက်ထားကြောင်း တွေ့ရသည်။ ခွဲစိတ်ကုသသည့် ဒဏ်ကို လူနာခံနိုင်ပြီ ဟု ထင်ရလျှင် ထင်ရခြင်း လူနာကို ၀မ်းဗိုက်ဖွင့်၍ ခွဲစိတ် ကုသကြပါသည်။
သည်တစ်ခါ ဘုရားတ သူက မမအိုဂျီဖြစ်သည်။ မမအိုဂျီ ဘာကြောင့်ဘုရားတရသည် ဆိုတာကို ဒုတိယ ခွဲစိတ်အကူဆရာဝန်အဖြစ် တာဝန်ယူနေရသော ကျွန်မ ချက်ချင်းသိလိုက်သည်။ ၀မ်းဗိုက်တစ်ခုလုံးမှာ အညစ်အကြေးတွေ ဖုံးလွှမ်းကာ နံစော်လျက်ရှိသည်။ အညစ်အကြေးနံ့သည် နှာခေါင်းစည်းအ၀တ်ကို အလွယ်တကူပင် ဖြတ်ကျော်လျက် ၀င်ရောက်လေသည်။ အူများက အညစ်အကြေးဖြင့် ရိနေကာ တချို့ နေရာတွေမှာ ထိလိုက်လျှင် ရိရွဲကြွေကျလာသည်။ ဤ၀မ်းခေါင်းကို ဆေးရမည်။ နော်မယ်လ်ဆေလိုင်း ဟုခေါ်သော သန့်စင်စွာ ပေါင်းခံယူထားသည့် ဓာတ်ဆားရည်ဖြင့် ဆေးရမည်။
သည်တော့ ကျွန်မတို့အားလုံး အလိုအလျောက်ပင် တညီတညွတ်တည်း ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြ၏။ ကျွန်မတို့ ဆရာဝန်အချင်းချင်း ပိုက်ဆံစုထည့်ပြီး နော်မယ်ဆေလိုင်း ပုလင်းတွေ ၀ယ်ကြမည်။ အားဖြည့် ပေါင်းခံရည် ပုလင်းပေါင် များစွာသုံးလျက် ခပ်ဖွဖွ ဆေးယူရပါသည်။ ခပ်ဖွဖွဟုဆိုရည်က ပယ်ပယ်နယ်နယ် ကိုင်တွယ်လျှင် ရိနေသော အူအချို့ ထပ်ပြတ်လာမှာ စိုးရိမ်၍ဖြစ်သည်။
ထိပ်ပိုင်းသားအိမ်မှာ ထိုးနှက်မှုဒဏ်ကြောင့် အပေါက်နှစ်ပေါက် ဖြစ်သွားသည်ကို ယခုမှ တွေ့ကြရသည်။ သားအိမ်ပါမကဘဲ အစားဟောင်းအိမ်ကို တစ်ချက်ထိုးမိထားသည်။ အစာဟောင်းအိမ်ပေါက်ပြဲသွားသည်။ ထို့ပြင် ၀မ်းခေါင်းမြှေးပါ ပေါက်သွားသည်။ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ပေးသူ၏ ခန္ဓာဗေဒ အသိပညာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု အဆင့်မှာ သုညအောက် အနုတ်လက္ခဏာပဲ ဟု ကျွန်မတို့သိနိုင်ပါသည်။
တွေ့သမျှ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေကို တတ်နိုင်သမျှ ဖာထေးချုပ်။ အူတစ်ချို့ကို ဖြတ်ထုတ်၊ ကောင်းနိုင် သေးသည်ဟု မျှော်လင့်ရသော အစိတ်အပိုင်းတို့ကို ခပ်ဖွဖွ ရွရွလေး ပြန်ချုပ်ဆက်၊ တချို့ဟာကို သည်အတိုင်းထား၊ လက်ဖြင့် သွားမထိနဲ့။ ခွဲစိတ်နေသည့် ကာလတစ်လျှောက်လုံး ကျွန်မ သတိလက်လွတ် အသက်ရှူအောင့်ထားမိတာ ဘယ်နှစ်ကြိမ်လဲ မရေတွက်နိုင်တော့ပါ။ ၀မ်းဗိုက်ကို ပြန်ပိတ်ပြီးမှ အသက် ၀၀ ရှူနိုင်ပါသည်။
မမ အိုဂျီ က သက်ဆိုင်ရာ ကိစ္စအားလုံး ကုသ ပြီးစီးသွားသည့်အခါ သက်ပြင်းရှည်ကြီး တစ်ချက် ချလိုက်တာ ကျွန်မ ကြားလိုက်ရသည်.. လိုအပ်သည့် ပဋိဇီဝဆေးဝါးတို့ကို ကျွန်မတို့ပဲ ငွေစုပြိး ၀ယ်ကြ၏။ မှော်လင့်ချက်ကတော့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိသည်။ လူနာမိန်းကလေး ကံကောင်းသည် ဟုပြောမလား.. ကျွန်မတို့ အိုဂျီမမ တော်သည် ဟုပြောရမလား.. ကျွန်မတို့ ဆရောစားဝန်အားလုံး၏ မေတာ စေတနာ ထိရောက်သည် ဟုဆိုရောစးမလား.. ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ထိုမိန်းကလေး အသက်ရှင်ခွင့်ရနေဆဲဖြစ်သည်။
လူနာ၏ မိခင်မှာ ကျွန်မတို့အား ကျေးဇူးတင်လွန်းလှသဖြင့် လက်အုပ်ချီ၍ ကန်တော့ရင်း ၀မ်းသာ မျက်ရည်များဖြင့် ငိုပြန်လေသည်။ သမီး၏ အသက်သခင် ကျေးဇူးရှင်တို့အား သမိးအဖြစ် ကိုမချွင်းမချန် ပြောတော့မည် ဟု စိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ပုံရသည်။ မိန်းကလေး၏ ဖြစ်စဉ်ကို ကျွန်မတို့အား ရှက်ကြောက်လျက်က ဖွင့်ပြောပြခဲ့သည်။ အကယ်၍သာ သူတို့သည် ချမ်းသာသည့် မိသားစုဖြစ်ခဲ့လျင် ရလဒ်မှာ ပြောင်းလဲ သွားနိုင်ပါသလားဟု ကျွန်မ တွေးကြည့်မိသည်။ မိန်းကလေးသာ ချမ်းသာခဲ့သည် ဆိုလျှင် ထိုယောက်ျားက မယူဘဲ ရှောင်ပြေးသွားဦးမလား..
ရှောင်ပြေးသွားသည်ပဲ ထားပါ.. ရုပ်ရှင်တွေထဲကလိုမိန်းကလေးကို လက်ထပ်ထိမ်းမြားယူလိုသည့် အခြားယောက်ျားတစ်ယောက် အဆင်သင့်မရှိနိုင်ဘူးလား.. ကလေးအဖေဖော်ဖို့ ဟူသည့် ခပ်ညံ့ညံ့ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မိဘက မိန်းကလေးကို အိမ်ထောင်ပြုပေးလို့ မရနိုင်ဘူးလား.. (မျှတတာ မမျှတတာ ဆိုသည်က လုံးလုံး အရှက်ကွဲရသည့် ကိစ္စနှင့် ယှဉ်သော် ထည့်တွက်စရာမလို အောင် သေးဖွဲပါသည် ဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခွင့်လွှတ်စိတ် မွေးကြလိမ့်မည်။ ) ထားပါတော့... အဲသည်လို အခြားယောက်ျားတစ်ယောက်ကို လိမ်လည် ပြီး မပေးစားလိုလျှင်လည်း က်ျကိုယ်ဝန်ကို အသက်အန္တရယ် မရစေဘဲ ကိုယ်ခန္ဓာမှ ဖယ်ထုတ်ဖို့ လုံခြုံစိတ်ချရသည့် ကုသမှုကို ပေးမည့် နေရာတွေ ဆိုတာ နံပါတ် စဥင်္်ိုက် စီတန်းပြီးရမလာနိုင်ဘူးလား..
သည်တော့ ကုန်ကျစရိတ် အနည်းဆုံးနည်းကိုရှာသည့်အခါ.. အညံ့ဆုံးနည်းကို သုံးပြီး ဖြေရှင်းပေးသူထံ ရောက်သွားသည်။ ဘာမှ မတတ်သည့် လူတစ်ယောက်၏ လက်ထဲသို့ မိမိအသက်ကို ပုံအပ်ပေးလိုက်ရသည်။
ဤကဲ့သို့ အလားတူ အဖြစ်မျိုးတွေ နောက်ထပ် ဘယ်နှစ်ခု လာဦးမည်နည်း.. ဘယ်လို ကာကွယ်ပေး နိုင်မည်နည်း.. အရွယ်ရောက်လာသည့် မိန်းကလေးတွေကို ရည်းစားလုံးဝ မထားရဟု လူကြီးများက အာဏာသုံးပြီး ထိန်းချုပ်စောင့်ကြပ်ထားခြင်းသည် ဤပြသနာ၏ ဖြေရောစှးင်း ကာကွယ်နည်း ဖြစ်မလား....
ရည်းစားထားလိုက ထားပါ။ နှစ်ယောက်တည်း ဘယ်တော့မှ အတွေ့မခံနှင့် ဟု ဆုံးမခြင်းသည် ဤပြသနာ၏ ကာကွယ်နည်း ဖြစ်မလား..
ရည်းစားနှင့် တွေ့လိုလျှင် ကိုယ်ဝန်မရှိအောင် ဘယ်လိုနေ.. ဘယ်လိုရှောင်.. ဘာဆေးသုံး စသည်ဖြင့် ညွှန်ကြားပြီး အသိပညာပေးခြင်းသည်.. သင့်တော်သော ကာကွယ်နည်း. ဖြေရှင်းနည်း ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား..
ကျွန်မကတော့ ကျွန်မဆေးခန်းသို့ ရောက်လာသည့် အလားတူ ပြသနာတွေကို စကားတစ်ခွန်းဖြင့် အမြဲရှောင်လေ့ရှိသည်..
ကဲ.. ဆိုကြပါစို့.. ဤအဆင့် ဤကာကွယ်မှုတွေ ကို မရခဲ့လို့.. ကိုယ်ဝန်ရလာပြီ ဆိုပါစို့.. ယောက်ျားကလေး ကလည်း တာဝန်မယူ လက်မထပ်လိုဘူး ဆိုပါစို့ (ဤနိုင်ငံမှာ ကိုယ်ဝန်အတွက် အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းနည်းက တစ်ခုပဲ ရှိသည်။ ထိုရည်းစားနှင့် အချိန်မတန်မီ လက်ထပ် ပစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။)
ကျွန်မတို့ ဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးကြမလဲ.. နင်လုပ်တဲံ အပြစ် နင်ခံရမှာပဲ.. ဒါတရားတယ်.. ခံပေါ့ ဟု ပြောရမလား..
သည်လိုဆိုလျှင် ဤမိန်းကလေးနှင့် (အနည်းဆုံး) ထပ်တူထပ်မျှ သို့မဟုတ်.. ပိုရ်ျ ပင် အပြစ်ကြီးသာ.. တာဝန်ရှိသော... ဦးဆောင်သူယောက်ျား ကို တော့ ဘယ်လို သဘောထားရမလဲ...
သူကယောက်ျားပဲလေ.. သူ့မှာက ပြစ်မှုအတွက် ခြေရာ လက်ရာ ဘာမှ မကျန်နိုင်သည့် အားသာချက်ကြီှးရှိနေမှပဲ.. ပြစ်မှုမှ ကွင်းလုံးကျွတ်လွတ်ရုံမက ဘယ်သူကမှ ဘာသံသယအမြင်နဲ့မှ အကြည့်မခံရသည်အထိ ဤအမှုမှ ကင်းရှင်းစေ ဟု လွှတ်ပေးထားရတာ.. သဘာဝတဲ့လား..
ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမ သဘာဝမှ မတူဘဲ ဟု အဲသည် သဘာဝဆိုတာချည်းကို လွှဲချပြီး အဖြစ်မှန်ကို မျိုသိပ်နေရတာ ခွင့်လွှတ်နည်း အစစ်ဟုတ်ရဲ့လား.. ဆူးပေါ်ဖက်ကျခြင်းနှင့် ဖက်ပေါ်ဆူးကျခြင်းဟုသည့် ရှေးရိုးစကားပုံတစ်ခုကို ယခုတိုင် အသက်သွင်းနေရဆဲလား.. အဲသည် စကားပုံဟာ ယခုအထိ အသုံးတည့်နေတုန်းပဲလား.. မိန်းမတွေ ဒါထက် သတ်တိရှိဖိုက လိုနေပြီလား..
ကိုယ့်ရင်သွေး၏ ဖခင်ရင်းဖြစ်သော ကလေးအဖေနာမည်ကို ရိုးသားစွာ အမှန်အတိုင်း ဖော်ထုတ်ပေးရမည့် ကိစ္စမှာ ဘာတွေများ ကြောက်စရာ ရှက်စရာ ရှိမှာမို့လဲ... တစ်ယောက်တည်းမွေးပြီး တစ်ယောက်တည်း ပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား.. အမှန်တရားတစ်ခုကို ရိုးသားစွာ ရင်ဆိုင်ဖို့ သတ်တိမရှိသင့်ဘူး လား..
မိန်းကလေးက မိမိဖြစ်ခဲ့သည့် အမှုကိစ္စကို ပတ်ဝန်းကျင်အား ဖော်ထုတ်ရင်ဆိုင်ရာတွင် "မျက်နှာပြောင်တိုက်လှသည်" ဟု ကဲ့ရဲ့ခြင်းကို ခံနိုင်သည်အထိ သတ္တိရှိရှိ ရင်ဆိုင်သင့်သည်ပဲထား.. ကလေးကြီးပြင်းလာသည့် အခါ ကလေးခံစားရမည့် စိတ်ထိခိုက်မှု ဒဏ်ရာ.. စိတ်နာကြည်းမှု ဒဏ်ရာကို ကျွန်မတို့ ဘယ်လို လုပ်ပြီး ကြိုတင် မှန်းဆကြည့်နိုင်မလဲ.. က်ျကလေးသည် သန္ဓေသားဘ၀မှာ သေဆုံးပစ်ရခြင်းကို နှစ်သက်သလား.. မွေးဖွားကြီးပြင်းလာပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် ရလာမည့် ထိခိုက်နာကျင်မှုကိုပဲ နှစ်သက်သလား.. ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိခဲ့ရင် ကလေးက ဘာကို ရွေးချယ်ချင်မလဲ.. ကျွန်မတို့ ဘယ်လိုမှ မသိနိုင်.. မိခင်၏ လင်မရှိဘဲ မွေးရဲသည့် သတ္တိကို ကြီးပြင်းလာမည့် ကလေးက ရဲရင့်မှု ဟုမယူဆဘဲ.. မိမိအား အရှက်ခွဲ နှက်စက်မှု ဟု ယူဆလာစရာ အကြောင်းရော.. မရှိဘူးလား..
တွေးရင်းတွေးရင်းနှင့် ဤပြသနာသည် ဖြေရှင်းလို့ ရတော့မှာမဟုတ် ဟု အားလျော့ချင်သလိုလို ဖြစ်လာသည်။
လောကရှိ မိန်းကလေး အားလုံးအတွက် အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုတော့ ရှိ ရမှာပေါ့.. ဘာနည်းဖြစ်မလဲ.. ကျွန်မတို့ ဘာကူညီပေးနိုင်မလဲ.. တခုခုတော့ ရှိရမည်.. အဲသည်လိုနှင့် ကျွန်မ၏ မှတ်စုတွေ .. တမျက်နှာပြီး တစ်မျက်နှာ ပွားလာခဲ့တော့၏..
Posted by Maw at 6:21 AM 1 comments
တစ်ခါက ဧရာဝတီညများ (ဂျူး-လွင်မိုး)
စကြည့်ကာစမှာ မကြိုက်ပါဘူး.. ဒေါ်ငွေအိမ် (မေသန်းနု) က ဦးမင်းခေါင် (ညွှန့်ဝင်း) ကို ရေချိုးပေးနေတဲ့.. ပြကွက်.. ဦးမင်းအောင်က ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံးနဲ့ မျက်နှာ.. ဟင့်အင်း.. သည်လိုမျက်နှာမဟုတ်ရဘူး.. အပြစ်ရှိတဲ့ သူရဲ့ အားတုံ့အားနာ.. အနည်းငယ်တော့ ကြည်နုးချမ်းမြေ့စေ.. သို့ပေမယ့်.. အပြစ်ရှိသူရဲ့ မလုံမလဲ.. မျက်လုံးမျိုးပါသင့်တယ်...
ရဝေအောင်ရဲ့ .. သံစဉ်မမှန်တဲ့ ကျွန်တော့ဖေဖေလားဟင်.. ဆိုတဲ့ အမေး ကို စိတ်ပျက်မိပေမယ့်.. မိုးကလျာထက် လား.. model မလေးရဲ့ ခပ်ရို့ရို့.. မ၀ံ့တ၀ံ့ ဟန်ကလေးက တော့.. စာထဲမှာ ဂျူး ချယ်မှုန်းထားတဲ့ ငွေအိမ်စံရဲ့ ဟန်ကလေးပါပဲ...
မြင်းစီးတဲ့ အခန်းတွေ မပါတော့ဘူး.. အေးလေ.. အဲဒါက ရိုက်ရခက်ပေမပေ့ါ.. အသက်စွန့်ရတဲ့အခန်းတွေ.. အဲသည်.. သားမြင်းစီးသွားတာကို လိုက်ကယ်တဲ့အခန်းမပါဘဲ.. . "တခါတရံမှာ ဖြစ်နိုင်ချေလေး တစ်ခုတည်း အတွက် အသက်ကိုပါ ရင်းပြီး လုပ်ကြရတတ်တယ်" ဆိုတဲ့... စကားသက်သက် ပါလာတော့... ဒီကားကြည့်တဲ့ လူအားလုံး ၀တ္ထု ဖတ်ထားကြပါ့မလား စိတ်ပူမိတယ်..
၀တ္ထုဖတ်ထားရတော့.. အားလုံးကို သိနေတယ်.. ဘယ်လောက်လေးပဲ ပြပြ ခြုံငုံမိနေတယ်..
ဇာတ်ကားကြည့်ရင်း ကိုယ်ရသလို.. သူများတွေ မရကြမှာကို အခြောက်တိုက် ပူပန်နေမိတယ်..
မကျေနပ်မိပါဘူး.. ဂျူးကတော့ပြောသတဲ့.. "ကျွန်မ ကျေနပ်ပါတယ်" တဲ့..
ကိုယ်ကတော့.. "မကျေနပ်ပါဘူး.." လို့ ရေရွတ်နေခဲ့မိတယ်..
ငွေအိမ်နဲ့ ဦးမင်းခေါင် အခန်းကိုအတိုချုံ့ပစ်လိုက်တယ်.. မမခင်မင်းမေ.. ဆိုတာကလည်း.. မပီပြင်တော့ဘူး.. ဟုတ်ပေတာပဲ.. ဒါကြောင့်လည်း.. ပင်လယ်နဲ့ တူသော မိန်းမ များ ..ဆိုတဲ့ နံမည် ပေးလို့ မရတော့တာပေါ့..
ဒါပေမယ့် ကြည့်နေရင်းနဲ့... အပေးနိုင်ဆုံးတွေထဲက အကောင်းဆုံးကို ပေးဖို့ ကြိုးစားထားတာ... ပေးခဲ့တာကို တွေ့ရတယ်.. စိတ်တိုင်းမကျပေမယ့် ကျေနပ်လာတယ်..၀တ္ထုမှာ ကိုယ်တို့ ရနိုင်တာ အများကြီး.. ရုပ်ရှင် အဖြစ်နဲ့ ဖြစ်နိုင်တဲ့ဘောင်တွေထဲကမှ ရနိုင်သလောက်ကို ရွေးချယ် ပေးကြရတော့.. ဒီလောက်တော့ ရှိမှာပေါ့..
၀တ္ထုနဲ့ ရုပ်ရှင်ဟာ.. အပြိုင် မဟုတ်ရဘူး.. အပြန်အလှန်ဖြည့်စွက်မှုသာ ဖြစ်တယ်.. တဲ့.. (ပြင်သစ်စာထဲက Discussion တစ်ခုမှာ ပါတာပါ..) ဟုတ်ပါတယ်.. အပြန်အလှန်ဖြည့်စွက်ပေးနေတာ..
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်.. စာတွေ ဖတ်လေ့မရှိပေမယ့်.. ရုပ်ရှင်ကားလဲ တိုင်းကြည့်တတ်သူတွေ .. တခုခု ရသွားနိုင်သေးတာပဲ..
ထူးထူးခြားခြား သတိထားမိတာကတော့.. ဟသာင်္ (လွင်မိုး) နဲ့ သူ့သမီး ငွေအိမ်စံ (မိုးကလျာထက်) တို့ စကားပြောတဲ့အခန်းမှာ.. ငွေအိမ်စံကလေး စကားကျန်ခဲ့တယ်.. အဲသည် ကျန်ခဲ့တဲ့ စကားဟာ.. ကိုယ် ကိုယ်တိုင် သဘောကျလို့.. စာအုပ်ထဲမှာ လိုင်းသားခဲ့တဲံဟာမို့ ချက်ချင်း သတိထားမိသွားတယ်.. အင်းလေ.. ထည့်လို့ မရလို့ ဖြစ်မယ် ထင်ပါရဲ့...လို့ ဖြေလိုက်ရတယ်... အဲဒါလေး ပါရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ.. ဒါဟာ.. အားလုံးကို မေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းတစ်ခု ဖြစ်မှာမို့ သိပ်အရေးပါပါတယ်..
ဘယ်နေရာမှာ ပြောတာလဲ ဆိုတော့.. "အိမ့် ကို ဘိုးဘိုး ကလဲ ပြောတယ်.. အိမ်ဟာ.. ဘွားဘွားတို့ မေမေ တို့နဲ့ နည်းနည်း မှ မတူဘူး တဲ့.. . အင်္ဂလိပ်လက်ထက်မှာ ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ ဘွားဘွားဟာ.. အင်္ဂလိပ် တော်လှန်ရေးမှာ ရှေ့တန်းက ပါခဲ့တယ်.. မေမေဟာလည်း ဂျပန်ကို တော်လှန်ခဲ့တဲ့ တော်လှန်ရေးရဲမေ ဖြစ်ခဲ့တယ်.. ဂျပန်ကို တော်လှန်ခဲ့တယ်..." အဲသည်နားမှာ ရုပ်ရှင်ထဲက ကလေးမ ဟာ စကားရပ်သွားတယ်..
"ဖေဖေနားလည်ပါတယ်.သမီးရယ်..." လို့ လွင်မိုးက ဆက်ပြောလိုက်တယ်..
"ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကာလမှာ လူဖြစ်လာတဲ့ အိမ်က ဘာကို တော်လှန်ရမှာလဲ.." တဲ့ "ပညာတတ်တွေကို လိုအပ်နေချိန်မှာ အိမ် ဆေးတက်ကသိုလ် တက်နေတယ်..ဒါ မလုံလောက်သေးဘူးလား" တဲ့.. အဲဒါ.. ၇၀ နှစ်များဆီက ပါ.. အခု ကိုယ်တို့ က ၂၀၀၅ မှာ ရှိနေကြတယ်..
"အိမ်က ဘာကိုတော်လှန်ရမှာလဲ.. " ဆိုတဲ့ ငွေအိမ်စံ ရဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေကြည့်ကြဖို့ သင့်တယ် လို့ထင်တယ်..
Me generation နဲ့ We generation အကြောင်းရယ်ကို ဆက်စပ်ကြည့်ချင်တယ်..
ကိုယ်ဘာရမလဲ ဆိုတာထက်.. ကိုယ် ဘာလုပ်ပေးနိုင်သလဲ ဆိုတဲ့ ကိစ္စ
ဘာကို တော်လှန်ရမှာလဲ.. တဲ့.. နယ်ချဲ့မရှိဘူး.. ၈ျပန်ဖက်ဆစ်မရှိဘူး.. လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံ..
ဒါပေမယ့် တော်လှန်စရာတွေ အများကြီးရှိတယ်.. မကောင်းတဲ့ အမူအကျင့်တွေကို တော်လှန်ရမယ်... ရေလိုက်ငါးလိုက် စိတ်ဓာတ်တွေကို တော်လှန်ရမယ်.. ချောင်သလိုနေတာတွေ.. မိုးခါးရေသောက်တာတွေ... ကိုယ်တို့ ခေတ်မှာ တော်လှန်စရာတွေ များပါတယ်.. ကိုယ်ဘာရမလဲ.. ဆိုတာထက် ကိုယ်ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ.. တဲ့..
အိမ်စိုးမေ.. သေနက်မှန်ပြီး သေခါနိးမှာ.. မြင်ယောင်နေတဲ့.. ဘ၀.. အေးချမ်းသော.. ပျော်ရွှင်သော.. ငြိမ်းချမ်းသာယာတဲ့ မိသားစုဘ၀.. သူအဲဒါကို လိုချင်ခဲ့တယ်.. အဲသည်အတွက် သူ လုပ်သွားခဲ့တယ်.. သူ့အတွက် မရတောင် နောက်လူတွေ အတွက်.. အခုကိုယ်တို့တွေ ဘာတွေ မရခဲ့ဘူးလဲ.. ဘာတွေ လုပ်ပေးခဲ့မလဲ.. . ဘာလုပ်နိုင်သလဲ..
ဂျူးကတော့ နှမ်းအထွက်တိုးရေး လုပ်နေတယ်..ထင်ပါရဲ့.. နှမ်းတွေ များလာတဲ့အခါမှာတော့ ဆီဖြစ်လာမှာ သေချာပါတယ်..
နောက်တစ်ခုက .. Me generation နဲ့ We generation အကြောင်း.. အဲဒီဟာ ကို သဘောကျတယ်.. သိပ်ကို ကျေနပ်သွားတယ်..
ဟိုခေတ်တုန်းက လူငယ်တွေ ဟာ.. ကိုယ်က တိုင်းပြည်ကို ဘာလုပ်ပေးရမလဲ ဆိုတာကို ကြည့်တယ်.. တဲ့.. We generation ပေါ့..
ခုခေတ် လူငယ်တွေက.. ကိုယ့်ကို ဘာတွေ လုပ်ပေးမလဲ.. ကိုယ်ဘာတွေ ရမလဲ.. ဆိုတာကိုပဲ ကြည့်တဲ့ Me Generation ဖြစ်နေတယ်.. တဲ့..
ကြိုက်တယ်.. ကျေနပ်တယ်.. အထူးသဖြင့် ချီးကျူးချင်တာက တော့ လွင်မိုးပါ.. သူဟာ တစ်ခုခုကို လုပ်နေတယ်.. သူဟာ ပေးချင်နေသူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်တယ်.. ဒါမျိုးကို သူလုပ်ပေးရဲတာ သူ့ကို ချီးကျူးတယ်.. မလိုအပ်ဘဲ.. Close up တွေ အများကြီးပါနေတာရယ်. .. (ကောင်းကောင်းကြီး နားမလည်လှပေမယ့်) မြင်ကွင်းတွေက တမျိုးကြီးတွေ ဖြစ်နေတဲ့ ရိုက်ချက်တွေကလွဲရင်.. တကယ်ကို တစုံတရာ ပေးဖို့ ကြိုးစားထားတဲ့ ကားပါပဲ..
ဇာတ်ကားရဲ့ အဆုံးမှာတော့ ကိုယ့်နောက်နားက အတွဲဆီက ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အသံကို ပီပီသသ ကြားလိုက်ရတယ်.. ဟယ်.. ပြီးသွားပြီ.. ဘာမှလည်း မပါဘူးတဲ့.. တော်တော်လေး စိတ်ဆင်းရဲသွားပါတယ်.. ကားအကောင်းစားကြီတွေစီး၊ မင်းသမီးက လှလှလေးဝတ်၊ ဟိုတယ်တွေမှာ ကော်ဖီတတ်သောက်.. ပန်းခြံ တွေမှာ လှည့်ပတ် သီချင်းဆို စတဲ့ ချစ်ခန်းကြိုက်ခန်းတွေ တော့ မပါဘူး.. သူကအဲဒါကို ဆိုလိုတာများလား.. ပေးကားပေး၏ မရ ဆိုတာ မျိုးတွေလည်း ရှိသေးတာပဲ.. လို့ စိတ်ဆင်းရဲ စွာတွေးမိတယ်..
ပေးလို့ ရတဲ့ ဘောင်အတွင်းက ကြံဖန်ပြီး တတ်နိုင်သလောက် ခက်ခက်ခဲခဲ ပေးနေတာကို မရကြတာတော့.. အတော်စိတ်ဆင်းရဲမိတယ်..
Posted by Maw at 6:15 AM0comments
တိမ်နဲ့ ချည်တဲ့ကြိုး (ဂျူး)
အရင်ဝတ္ထုတွနဲ့ ယှဉ်ရင် .. အားလုံးပြောသလိုပဲ...နည်းနည်းတော့ ဖွာနေသလိုပါပဲ... (ဓာတ်ပုံတစ်ပုံဟာ သိပ်မပြတ်သားဘဲ.. ဆေး ဖွာသလိုမျိုးကိုပြောတာပါ)
ဒါပေမယ့်.. သိပ်လှပါတယ်.. ကိုယ်က ပိုလို့ ခံစားမိတယ်.. စိတ်တွေ ထိန်းသိမ်းလို့ မရအောင်ဖြစ်တဲ့အခါ.. ဘာကိုလုပ်မိမယ်ဆို တာ ကြိုတင် ပြဌာန်းထားလို့ မရတာကြောင့်.. ကစဉ့်ကလျားဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့.. လုပ်လိုက်မိမှာပဲ.. နောက်တစ်ခုက အောက်ချင်းငှက်မလေးရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်လိုက်ပုံ နဲ့.. နိမိတ်ပုံထင်ကြည့်လိုက်ရင်.. ငွေ့လုပ်ရပ်ဟာ ဂရုဏာသက်စရာပါ..
သူ့မှာ အချစ်ရှိတယ်.. သူ ထျန်းအုပ်ထန် ကို ချစ်တယ်... ပိုင်စိုးကို တွယ်တာတာ.. တကယ်တော့ ထျန်းအုပ်ကို ချစ်တယ် လို့ သူထင်သွားတယ်.. အဲသည် အချစ် အတွက်နဲ့ပဲ.... အင်း... ဘယ်လိုပြောရမလဲ.. ထျန်းအုပ် က သူ့ကို ချစ်နေသော်ငြားလည်း.. ချင်းလူမျိုး မျိုးနွယ်ကို စောင့်ရှောက်ရမယ်.. လေ.. အဲဒါက သူ့ကို ရှက်စိတ်နာစေတယ်.. ပထမမှာ ပိုင်စိုးလား.. ထျန်းအုပ် လားမသိပေမယ့်.. ထျန်းအုပ် နဲ့ မဖြစ်နိုင်တော့ပါလား ဆိုတာကို သိတဲ့ အချိန်မှာ သူချစ်သူဟာ ထျန်းအုပ်ပဲ လို့ သေချာ သွားသလိုမျိုး.. အဲဒါဟာ စိတ်ရောဂါ တစ်မျိုး ဆိုရင်.. အဲသည် စိတ်ရောဂါ ကိုယ့်မှာလည်းရှိတယ်.. အဲဒါကြောင့်.. သူ့ကို ကိုယ်နားလည်တယ်..
ကားချောက်ထဲကျသွားတဲ့အချိန်မှာ.. သူ့ကိုချောက်ခြားစေတာက . .အတိတ်က အဖြစ်ဆိုးရယ်.. အခု လက်ရှိအခြေအနေရယ်.. အတိတ်က ကောင်လေး ဖုဒုလျန် ဟာ.. သူ့ကို ရုးရူးမိုက်မိုက်ချစ်ရင်း... သူနဲ့ ဝေးရမှာချင်းအတူတူ ဆိုပြီး ချောက်ထဲကို (ခုန်ချ သွားတယ်လို့ယူဆရတာပဲ.) ကျပြီး သေသွားရတယ်.. အဲဒါဟာ.. ဒီကလေးအပေါ် သူ့တာဝန်မကင်းဘူး လို့ နောင်တရ ချောက်ခြားနေတယ်..
ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့.. သူကိုယ်တိုင်က တွယ်ငြိမိပေမယ့်.. သူ့ကို ငြင်းဆန်ခဲ့သူ.. ချစ်စကားပြောမယ် ထင်မိပြီး ငြင်းလိုက်မယ် ဟန်တွေ ပြင်ပြီးကာမှ.. မမျှော်လင့်တာကြားလိုက်ရလို့.. ပိုပြီး မြတ်နိုးမိဟန်ရှိတဲ့ (ကိုယ့်ယူဆချက်ပါ) ချစ်သူ ပါ.. အဲသည် ချစ်သူအတွက် အသက်စွန့်တယ် လို အတိအကျ ပြောလို့ မရသလို မဟုတ်ပါဘူး လို့လည်း ငြင်းလို့ မရဘူး.. . ဒီနေရာမှာ ငွေဝန်းဟာ.. သူ့အတ္တ အတွက်လည်း အသက်စွန့်တာ ဖြစ်လို့.. အဲသည် အချိန် အဲသလိုလုပ်လိုက်တဲ့ ငွေဝန်းရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အဖြေရှာမယ် ဆိုရင်.. ရှုပ်ထွေးနေမှာ အသေအချာပါပဲ...
သူ့အတ္တအတွက် လို့ ဆိုရတာက.. သူ့ကြောင့် လူတစ်ယောက် အသက်ရှုံးရတယ် ဆိုတဲ့ နောင်တနဲ့ အသက်ရှင်နေတဲ့ လူတစ်ယောက် အဖို့.. သတိမေ့နေတဲ့ ထျန်းအုပ်ထန်ကို ထား ခဲ့ပြီး .. သူက အပေါ်ကို ရောက်လို့ အသက်ဘေးက လွတ်မြောက်နိုင်သည်ထား.. ထျန်အုပ်ထန် သာ ကျန်ခဲ့ရင် ချောက်ထဲပြုတ်ကျပြီး သေမှာ အသေအချာပဲလေ.. အဲသည် အခါ.. သူ့နောင်တက ၂ ဆင့်တက်နောင်တနဲ့ သူဘယ်လိုများ အသက်ရှင်မလဲ.. ဖုဒုလျန်က သူ့ဟာသူ မိုက်မဲစွာ သေလိုက်တာတောင်.. သူကို ချောက်ခြားနေစေခဲ့တာ.. ဒီတစ်ခါ.. သူတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်စွာ.. ကိုယ့်အသက် ဘေး လွတ်မြောက်ဖို့ဥိးစားပေးလိုက်လို့ ထျန်းအုပ် သေရတာပါ ဆိုရင်.. သူဟာ .. ပထမ ခံစားနေရတဲ့ စိတ်ဝေဒနာ ထက် ဆိုးတဲ့ စိတ်နဲ့ အသက်ရှင်နေသွားရတော့မယ်.. .
ထျန်းအုပ်ကို ချစ်တဲ့ စိတ်.. ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချစ်လွန်းတဲ့ အတ်တ.. တွေနဲ့အဲသည် လို သူလုပ်လိုက်တာ.. အဲဒီအချိန်မှာ သူသေလိုက်ဖို့ အဆင်သင့်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး.. ထျန်းအုပ်ထန် အပေါ်ရောက်သွားပြီး နောက်ထပ်ကျလာမယ့် ကြိုးတစ်ချောင်းကို မျှော်လင့်နေခဲ့သေးတယ်..
တောင်အောက်ကို ကျနေချိန်မှာလည်း.. သေဖို့ ကြောက်တဲ့စိတ် မဟုတ်တော့တဲ့.. ကစဉ့်ကလျား သို့သော် တည်ငြိမ်သော.. ထူးဆန်းတဲ့ စိတ်အခြေအနေ တစ်မျိုးနဲ့ .. ကျနေတယ်.. သိစိတ် မလွတ်ဘူး.. မိုးလင်းရင် မေ့နေတတ်တဲ့ အိပ်မက် ဟာ.. အဲသည် အချိန်မှာ ဖြတ်ခနဲ ပြန်သတိရတယ်.. ဒါဟာ ဖြစ်တတ်တာတစ်မျိုးပဲ.... ဒါကို အမိအရ ရေးနိုင်ခဲ့တာ ချီးကျူးရမှာပါ... အဲသည် အချိန် သူ ဟာ ရင်ခွင်တစ်ခုကို တမ်းတတယ်.. အဲဒါ ဘယ်သူလဲ.. သူမသိတော့ဘူး.. အဲသည် တောင်အောက်ကို ကျနေတဲ့ အချိန်မှာ.. ထျန်းအုပ်ထန် ဟာ သူ့ချစ်သူ မဟုတ်တော့ဘူး.. ကျေသွားခဲ့ပြီလေ.. သူလို မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ထဲမှာ.. ကိုယ့်အသက်ကို ပေးပြီး ကယ်လိုက်ပြီးပြီ.. ဒီလူ အသက်ရှင် ကျန်ရစ်ပြိ.... ကိုယ်ကတော့ သေရတော့မယ်.. အဲသည် စက်ကန့်အပိုင်းအခြားမှာ.. သူဟာ ထန်အုပ် ကို ချစ်မနေတော့ဘူး.....
ချစ်ခြင်း၊ ချစ်သူ စတာတွေ ကို မကြုံလိုက်ရသေးဘဲ သေရမယ့် သူ့အဖြစ်ကို နှမျောမိတယ်..... ဒါပေမယ့် ပြန်လည် ပြင်ဆင်လို့ မရတော့လို့. . သူစိတ်ကို လျော့ထားတယ်..
ကိုယ်သိပ်ကြိုက်တဲ့ အဖွဲ့ကတော့ အဲသည် နောက်ဆုံးခန်းပါပဲ.. သေဖို့ အောက်ကို ကျနေဆဲ.. အချိန်ပါပဲ.. အဲဒီအချိန်မှာ ငွေဝန်းနဲ့ ကိုယ်နဲ့ ဟာ တစ်ယောက်တည်းလို....
မသေနိုင်သော ဂုဏ်သတင်း ရှိစေသတည်း.....
မသေနိုင်သော အချစ် ရှိစေသတည်း...
အဲဒါကတော့ တိမ်နဲ့ ချည်တဲ့ကြိုး နောက်ဆုံးခန်းရဲ့ အဖွင့် စာပိုဒ် ပဲ...
ငွေဝန်း သေလိုက်တာ ဂုဏ်သတင်းအတွက်.. မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်... သေလိုက်တဲ့ ငွေဝန်းမှာ ဂုဏ်သတင်းကျန်ခဲ့မှာ... ထျန်းအုခ်ထန် ခမျာတော့ ... မသေနိုင်သောအချစ် နဲ့ ဘယ်လို အသက်ဆက်ရှင်သွားရှာမယ် မသိ... သူ့အတွက်တော့ ငွေဝန်းရဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ ကျိန်စာတစ်ခုလိုပဲ.... သူ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာ ငွေဝန်းရဲ့ သေခြင်းနဲ့ လဲယူခဲ့တယ် ဆိုတာကို သိရပြီးတဲ့နောက်မှာ... ဘယ်လောက် ခံစားရဦးမယ်ရယ် မသိတတ်အောင်ပဲ...
..သူမ သစ်ပင် အကိုင်းကို ဆွဲမိဆွဲရာ ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည် ...
အို.. နာလိုက်တာ.. ငွေဝန်းလက်ကို စူးရှသော ဝေဒနာက လွှမ်းမိုးသွားသည်..
သူမ အလန့်တကြားလွှတ်ချ လိုက်မိ၏။ သူမသည် ထိုနာကျင်မှုမှ လွတ်မြောက်သွားပြီ.. သို့သော် ထိုဝေဒနာသာမက အရားအားလုံးကနေ လွတ်သွားခြင်း ဖြစ်သည်.. သူမ နှာခေါင်း ထဲသို့ လေတွေ တိုးဝင်လာသည်။ အေးလိုက်တာ..
အလောတကြီး ခပ်ဝါးဝါးအသံသည် သူမ နောက်ဆုံးကြားလိုက်ရသော အသံပါပဲ..
အဲသည် နောက်တော့ တစ်လောကလုံး တိတ်ဆိတ်သွား၏...
အသူတရာ နတ်လှသော ချောက်ကမ်းပါးကြီး ဟူသည့် အသုံးအနှုန်းကို သူမ ကြားဖူးနေတာ ခဏခဏပါပဲ.. သို့သော် မိမိ၏ နောက်ဆုံးအချိန်သည် ထိုစကားလုံးနှင့် ဆက်စပ်နေလိမ့်မည်ဟု မနေ့က အထိ ကြိုတင်တွေးမကြည့်မိခဲ့..
မိုးကောင်းကင်ကြီးက ဇောက်ထိုးမိုးမျှော် ဖြစ်သွားသည်..
လေတွေက သူမ နှာခေါင်းထဲသို့ ကြမ်းတမ်း ပြင်းထန်စွာ တိုးဝင်လာသည်.. ..
သူမသည် အောက်သို့ လွင့်စဉ် ထိုးစိုက် ကျနေခဲ့သည်…
တိမ်တွေကို ထိတွေ့ချင်.. ခံစားချင်လွန်းသည့် မိန်းမ.. တိမ်တွေ ကြားထဲသို့ အဆီးအတားမရှိ တစ်ကိုယ်လုံး ထိုးစိုက်ဆင်းပြိး ၀င်သွားနေခဲ့ပြီ.. သူမ ပျော်ရွှင်ပါရဲ့ လား.. ကျေနပ်ပါရဲ့လား..
အောက်သို့ ကျဆင်းချိန် ဘယ်လောက် ကြာမှာလဲ.. ခြောက်မိနစ်၊ ရှစ်မိနစ်၊ တောင်က ဘယ်လောက် မြင့်ပါလိမ့်.. ပေငါးထောင်.. ခြောက်ထောင်.. မရောက်သေးဘူးလား..
တိမ်ငွေ့တွေက အေးစက်လွန်းသဖြင့် တုန်ခိုက်လာသည်..
သူမ ဘယ်လို အရာမျိူးအပေါ်ကျသွားမှာလဲ.. ကျောက်သားအတိ ပြီး သည့် ကျောက်နံရံစောင်းတစ်ခု ပေါ်လား..
သို့မဟုတ် မြေကြီးနှင့် ကျောက်သား ရောနေသည့် မာကျောသည့် အစိုင်အခဲတစ်ခုပေါ်သို့လား..
သို့မဟုတ် ယခုလိုပဲ နူးညံ့အေးခိုက်လှသည့် အဖြူရောင် တိမ်ခိုးတိမ်ငွေကတွေ ပေါ်သို့လား..
လောကကြီးမှာ မိမိကို စုပ်ယူဝါးမြိုထားသော အရာတွေက များလှသည်.. ထိုအရာများမှ လွတ်မြောက်ဖို့မှာ သေခြင်းတစ်ခုသာ အားကိုးစရာ ရှိတော့သည်..
သေခြင်းသည် သူမအား ကယ်တင်မည့် ကယ်တင်ရှင်..
နာကျည်းတုန်လှုပ်မှုတွေဆီမှ လွတ်မြောက်အောင် သူမကို ကယ်တင်လိမ့်မည်..
နောင်တတွေ ထံမှ လွတ်မြောက်အောင် ..
စိတ်ပျက် အားလျော့မှုတွေ ထံမှ လွတ်မြောက်အောင်..
သည်တော့ သူမ ဘာကိုများ ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်နေရဦးမှာလဲ..
အိုး.. အောက်သို့ မရောက်မချင်း နာကျင်မှုကို သူမ ခံစားရဦးမှာ မဟုတ်..
နောက် ဆုံးအချိန်အထိ တိမ်စိုင် တိမ်လိပ်များကို စီးပြီး တရွေ့ရွေ့ ခရီးနှင်နေသည် ဟု သဘောထားနိုင်သည်..
အောက်ခြေ အမာခံတစ်ခုခုနှင့် အရှိန်ပြင်းစွာ ထိပြီး အရိုးအစုအဝေးအဖြစ် ကွဲကြေ ကျိုးပြတ် မသွားမချင်းပေါ့...
သူမ ဤကဘာလောကမှ မထွက်ခွာမီ နောက်ဆုံးအချိန် .. နောက်ဆုံးမိနစ်.. နောက်ဆုံး စက္ကန့် တွက် မိမိချစ်သော သူတစ်ယောက်၏ ရင်ခွင်မှာ ရှိသွားနိုင်ဖို့ ခဏခဏ စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ဖူးသည်..
အခုတော့.. .. ထိုစိတ်ကူးသည်.. ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တော့မှန်း သူမ သိလိုက်ရပြီ.. ..
ချစ်သူ၏ ရင်ခွင်မှာ ခိုဝင်မှေးစက် ခွင့်လေးကို တောင် မရနိုင်တော့သည့် အဖြစ်မို့ သူမ ၀မ်းနည်းလှပါသည်.. ..
ဒါပေမယ့် ကျွန်မ ချစ်သူက ဘယ်မှာလဲ.. ဘယ်သူလဲ...
Posted by Maw at 6:03 AM0comments
(ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀တဲ့..။ ချစ်ရသူအတွက် တဘ၀တာ ပေးဆပ်ရင်း .. ချစ်သူကို ပံ့ပိုးဖြည့်ဆည်းရင်း သားသမီးများကို ပြုစုပျိုးထောင်ရင်း....... ပျောက်ဆုံးနေခဲ့တဲ့............... )
တစ်ချိန်တုန်းက ပျော်ရွှင်ကျေနပ်စွာ ရယ်မောခဲ့ဖူးသော မိန်းမတစ်ယောက်သည် အခန်းထဲမှာ ရက်ပေါင်းများစွာ လပေါင်းများစွာ တိတ်ဆိတ် နေခဲ့သည်။
အခန်းသည် ကျယ်ပြန့်သည် ဟု သူမတစ်ချိန်တုန်းက ထင်ခဲ့ဖူးသော်လည်း တကယ်တော့ ကျဉ်းမြောင်းလှပါသည်။ မှောင်မည်း တိတ်ဆိတ်သော အခန်း ထဲတွင် စီးကရက် မီးခိုးများသာ ကခန်ုပျော်မြူးလျက်ရှိသည်။ အပြင်လောက၏ လှပသော ပန်းများ၊ လတ်ဆတ် သော မွှေးရနံ့များသည် အခန်းထဲသို့ ရောက်လာတော့မလိုလိုနှင့် ရောက်မလာကြပါ။
မနေ့က သူမသည် မြတ်လေးပန်းပင်ကလေးတစ်ပင်ကို စိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ ယနေ့တော့ မြတ်လေးပန်းပင်ကြီးသည် ခြောက်သွေ့ တွန့်လိမ်သော ချုံနွယ်ပင်ကြီးဘ၀သို့ ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။
အခန်းထဲသို့ တစ်စုံတစ်ယောက် ၀င်လာတိုင်းထိုသူက တစ်ခုတည်းသော ပြတင်းပေါက်ကို သွားဖွင့်ပေးလေ့ရှိသည်။ ထိုသူကို သူမက အမြဲတမ်း မေးခွန်းတစ်ခုမေးလေ့ရှိသည်။
ထိုမေးခွန်းသည် အခန်းထဲတွင် ထပ်ကာတလဲလဲ ပဲ့တင်ထပ်လျက်ရှိသည်။
သူမသည် တစ်ခဏအတွင်း ဖျက်လတ်သွက်လက်စွာ အခန်းထဲတွင် လမ်းလျှောက်နေပြီးနောက် တစ်ခဏမှာတော့ အိပ်ယာပေါ်မှာ အ၀တ်စတစ်ခုလို ပုံလျက်သား လဲလျောင်းနေပြန်သည်။ အခန်းထဲမှာ တစ်ခါတစ်ခါ သူမတစ်ယောက်တည်းရှိ၏။
တစ်ခါတစ်ခါ မှာ တော့ မိန်းကလေးပေါင်းများစွာ သူမနှင့်အတူ ရှိနေပြန်သည်။ ဆံပင်ကို ထိပ်တည့်တည့်မှာ သေးသေး ကျစ်ကျစ်ကလေး စုစည်းထားသည့် သျှောင်ပေစူးမကလေး၊ အုပ်လုံးသိမ်းခါစ ဆံတောက်ဖားဖားနှင့် အပျိုပေါက်ကလေး၊ တစ်ပတ်လျှိုဆံထုံးနှင့် ပန်းပန်ထားသည့် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် မိန်းကလေး၊ အရွှယ်အမျိုးမျိုးသော မိန်းကလေးများသည် အခန်းထဲတွင် တိတ်ဆိတ်စွာ ရောက်လာလိုက်၊ တိတ်ဆိတ်စွာ ပြန်ပျောက်သွားလိုက်ရှိသည်။
အခန်းထဲသို့ အသက် ခြောက်ဆယ် အရွယ် လူကြီးတစ်ယောက် ၀င်လာသည်။
ထိုသူသည် အမှောင်ကို သေခြင်းတရားလိုပင် ကြောက်ရွံ့နေလေသလား။ အမှောင်ထဲက မိန်းမသည် တိတ်ဆိတ်စွာ ရယ်မောလေသည်။
ထုံးစံအတိုင်း ထိုသူက ပြတင်းပေါက်ကို ခပ်သွက်သွက် သွားဖွင့်၏။ အခန်းထဲသို့ လတ်ဆတ်သော လေများ ဖြည်းညင်းစွာ ၀င်ရောက် လာသည်။ အလင်းရောင်အောက်တွင် မိန်းမသည် အခန်းအလယ်တွင် မတ်တပ်ရပ်လျက်ရှိ၏။
"ငါ့ရဲ့ အခုနောက်ဆုံးထုတ်မယ့် စာအုပ်မှာ မင်းနာမည်ကို ‘ယ်’ီကေးရှင်း ရေးထားတယ်ကွ။"
ထိုသူက ၀မ်းသာအားရ အသိပေး၏။ သူမသည် ပျော်ရွှင်တတ်သော မိန်းမငယ်လေး ဖြစ်ခဲ့သည်။
"ဟုတ်လား.. ကျွန်မက ဘယ်သူမို့လဲ.."
အခန်းသည် တိတ်ဆိတ်သွား၏။ သူတို့နှစ်ယောက်သည် မျက်နှာချင်းဆိုင်`၍ အကြာကြီးငြိမ်သတ် နေကြသည်။ အခန်းထဲမှာ အရိပ်များ။ အရောင်များ စတင်လှုပ်ရှားလာချိန်တွင် ခင်ပွန်းဖြစ်သူက တစ်လုံးချင်း စကားစပြောလေသည်။
"မင်းဟာ အလွန်အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ စာရေးဆရာကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ ဇနီးလေ၊ ငါတို့လက်ထပ်ပွဲမှာ မင်းက ပန်းရောင်ဝတ်စုံ ၀တ်ခဲ့တယ် မဟုတ်လား.."
သူမ မပြုံးပါ။ သို့သော် လိုက်လျောစွာ ခေါင်းညိတ်၏။
"ဟုတ်တယ်.. ကျွန်မတို့ လက်ထပ်ခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်မတို့ လက်ထပ်တဲ့နေ့တုန်းက မကြင်လှတို့ စပါးကျီတောင် မီးစွဲခဲ့ပါသေးရော.."
ခင်ပွန်းသည်က သူ့ဇနီး၏ မှတ်ဥာဏ်အတွက် ကျိတ်ရ်ျ ချီးကျူးမိ၏။ သူ့ဇနီးသည် အလွန် ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်သော မိန်းမတစ်ယောက် ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် အချိန်ကာလသည် အခန်းထမှ ပျောက်ကွယ်သွားသည်။
အချိန်ကာလ ပျောက်ကွယ်သွားသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် သူမသည် ပျိုမျစ်နုနယ်သော မိန်းမရွယ်တစ်ယောက် ဖြစ်သွားသည်။ မိန်းကလေး သည် သူမ၏ ချစ်သူကို အလွန် ချစ်မြတ်နိုးလေသည်။ မြတ်လေးပန်းကုံးများကို သူမ၏ ဆံတောက်တွင် ဝေဆာလှပစွာ ပန်းပေးခဲ့သော ချစ်သူသည် စာရေးဆရာတစ်ယောက်ဘ၀သို့ ရောက်ရှိရေးအတွက် ရွာက ဆန်စက် မန်နေဂျာရာထူးကို စွန့်လွှတ်ခဲ့လေသည်။ ထိုအခါ သူမသည် သူမ၏ ယက်ကန်းစင်များကို စွန့်လွှတ်၍ သူ့နောက်သို့ ရဲဝံ့စွာ လိုက်ပါခဲ့သည်။
လောကတွင် တွေ့ကြုံရသော အခက်အခဲများကို သူမသည် ခင်ပွန်းသည်၏ ရှေ့က ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ ရက်ကန်း ချည်ရောင်စုံများကို လှပဆန်းကြယ်သော အဆင်အသွေးများ အဖြစ် ဖန်တီးနိုင်စွမ်းသော သူမသည် ဆေးဆိုးပွင့်ရိုက်လုပ်ငန်းကို အောင်မြင်စွာ အုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းသော လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်သွားသည်။ ထို့အတူပင် ခင်ပွန်းသည်၏ ၀ါသနာ၊ အချိန်ကာလ၊ ပညာ စသည့် အရာများအတွက် သူမ စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ၀င်ရောက်ဖန်တီးပေးခဲ့၏။ ခင်ပွန်းသည် စာကြည့်နေသည့်အချိန်တွင် သူမသည် မျက်လုံးများ တောက်ပရွှင်လန်းလျက်ရှိသည်။ ခင်ပွန်းသည်၏ လက်ရေးစာမူများကို တတ်စွမ်းသမျှ အသိဥာဏ်လေးဖြင့် ကူညီဖတ်ရှု အားပေးသော အချိန်တိုင်း သူမ၏မျက်နှာသည် ပြုံးရွှင်လျက်ရှိသည်။
"ရှင်ဟာ နိုင်ငံကျော် စာရေောစးောစးးဆရာ ဖြစ်ရမယ်.. ဖြစ်ကို ဖြစ်မှာ အမှန်ပဲ.."
ယုံကြည်မှုများသည် သူမ၏ ရင်ထဲမှ အခိုးအငွေ့အဖြစ် ထွက်ပေါ်လာပြီး ခင်ပွန်းသည်၏ ဦးနှောက်ထဲသို့ သစ်ပင်အမြစ်များသဖွယ် စိုက်တွယ်ခိုင်မြဲသွားလေသည်။ နေ့သစ်၏ အရုဏ်ဦးများကို နှစ်ယောက်အတူ ဖြတ်သန်းခဲ့ကြသည်။ မှောင်မည်းသော ညများကို နှစ်ယောက် အတူ ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြသည်။ ကြယ်ရောင် လရေောစားင်များ၊့ န်းရနံ့များနှင့်အတူ ပူပြင်းသော မျက်ရည်များ၊ ဃါးသည်းသော အမှန်တရောစားးများကို ခံစားခဲ့ကြသည်။ အကြိမ်ကြိမ် အခါခါ သူပြိုလဲတိုင်း သူမက ဆွဲထူတည့်မတ်ပေးခဲ့သည်။ သူစိတ်ပျက်သောအခါ သူမက ငိုကြွေးသူဖြစ်၏။ သူကျေနပ်တက်ကြွသောအခါ သူမက ပျော်ရွှင်ရယ်မောသူဖြစ်၏။ သူဒေါသတကြီးဖြစ်သောအခါ သူမသည် မင်စုပ်သော စက္ကူပ်တစ်ခုပမာ သူ့ဒေါသများအားလုံးကို စုပ်ယူပေးခဲ့သည်။
ထိုသူသည် မိမိရှေ့မှာ မတ်တပ်ရပ်နေသော မိန်းမကို မိမိဇနီးဟူသော အမှတ်ဖြင့် အားရ၀မ်းသာစွာ ပြောနေသည်။ ထိုမိန်းမသည် သူ့ဇနီး မဟုတ်ပါ။ မည်သူ၏ ဇနီးမှ မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်လည်း သူ့စကားကို ကန့်ကွက်မှု ထောက်ခံမှု များမပြုလုပ်ဘဲ ငြိမ်သက်စွာ နေခဲ့၏။
တိုးတိတ်သော သူမ၏ စကားသံကြောင့် သူပခုံးတွန့်လိုက်၏။ အခန်းသည် ချက်ချင်းပင် လေဟာနယ် တစ်ခုလို လွင့်မျောလျက်ရှိသည်။ မျက်နှာကြက်မှ ပင့်ကူမျှင်လေးတစ်ခုသည် ပင့်ကူနှင့်အတူ တွဲလောင်းကျလာပြီး သူမ၏ ပခုံးပေါ်မှာ ခိုတွဲနေသည်။
အချိန်အနည်းငယ် ကြာသောအခါ အခန်းထဲတွင် သူမတစ်ယောက်တည်း ရှိတော့သည်။ နောက်ထပ် အချိန်အနည်းငယ်ကြာပြန်သောအခါ အခန်းထဲသို့ လူတစ်ယောက် ၀င်လာသည်။ ထိုလူသည် လက်ထဲမှာ လိမော်သီးများကိုင်ထားသည်။ လိမော်သီး နံ့သည် အခန်းထဲမှာ မွှေးပျံ့လာသည်။ ထိုအချိန်မှာပင် သူမသည် လိမော်သီး စားချင်တာ တကယ်မှ ဟုတ်ရဲ့လား ဟု သံသယ ဖြစ်မိသွားသည်။
"မေမေ .. လိမော်သီး စားမယ် မဟုတ်လား"
ထိုအသံကို ကြားလိုက်ရသော အခါ သူမသည် အမှန်တကယ် လိမော်သီး စားချင်တာ မဟုတ်မှန်း သေချာသွား၏။
"ဟောဗျာ.. ဖြစ်ရပြန်ပြီ မေမေကလဲ"
သားအသံမှာ နူးညံ့ချိုမြသော်လည်း အေးစက်နေ၏။ သူမသည် ထိုသား၏ မိခင်ဖြစ်သည်။ သားသမီးတိုင်းသည် ပညာတတ်များ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုမိန်းမသည် သူမ သားသမီးများ၏ အောင်မြင်မှုကို သူမ၏ အောင်မြင်မှုအဖြစ် ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားခဲ့လေသည်။
တယ်လီဖုန်းမြည်သံ၊ တံခါးခေါင်းလောင်းမြည်သံများ၊ ဗီရိုတံခါး ဖွင့်သံ ပိတ်သံများ၊ တံခါး ဖွင့်သံ ပိတ်သံများ၊ ရုပ်မြင်သံကြားစက်မှ ဂီတသံများ အားလုံးသည် နံရံများကို စိမ့်ဝင်ဖောက်ထွင်းလျက် အေးစိမ့်သော အခန်းထဲသို့ ပျံ့နှံ့လာ၏။ မည်သူသည် မည်သည့်အသံကို ဖြစ်ပေါ် စေသူ ဖြစ်သလဲ ဆိုတာတော့ သူမ မခွဲခြားနိုင်ပေ။ ထိုအသံများကို ဆူညံသံများအဖြစ်သာ သူမ ယူဆသည်။ သူမသည် အရာရာအပေါ် သည်းညည်းခံနိုင်စိတ် မရှိတော့ပေ။ သူမ၏ မျိုသိပ်ထိန်းချုပ်မှုများသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာငြမ့်ခဲ့ပြီဟု သူမထင်နေသည်။ စိတ်ပျက် ငြိးငွေ့မှုသည် သူမ၏ ကိုယ်ခန္တာ ထဲတွင် ကပ်ပါးကောင်များလိုပင် ပွားများ ခိုတွယ်လျက်ရှိနေသည်။
"ဒါနဲ့ မေမေ.. မနက်ဖြန် ကျွန်တော် ဘုန်းကြီး ဘယ်နှပါး ပင့်ရမလဲ.. ဖေဖေက မေးခိုင်းလိုက်တယ်.."
သူမသည် ခုတင်ဆီလျှောက်သွားရာမှ ဖျက်လတ်စွာ လှည့်ကြည့် လိုက်သည်။
"ဘုန်းကြီး.. ဟုတ်လား.. ဘာအတွက်လဲ.."
သူမ၏ အခန်းပေါက်ဝတွင် လူသေထည့်သည့် ခေါင်းတစ်လုံး ရောက်နေပြီလား။ သူမသည် မကြာသေးမီက ထိုအခေါင်းထဲသို့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ကိုယ်တိုင်ထည့်ခဲ့ရသေးသည် ဟု မှားယွင်းစွာ မြင်ယောင်လာ၏။
"မနက်ဖြန် ကျွန်တော့်မွေးနေ့လေ မေမေရဲ့"
သား၏ အသံတွင် စိတ်ပျက်မှု နှင့် အနည်းငယ် ထူးဆန်းအံ့သြမှု ကို ဖော်ပြလိုက်သည့်အခါ သူမ ငြိမ်သက်သွားသည်။ မွေးနေ့..၊
မွေးနေ့ဟူသော အသိတရားသည် ကြယ်ရောင်ပြက်လိုက်သလို ဖျက်ခနဲ လင်းတော့မလိုနှင့် ပြန်၍ မှောင်ပိန်းသွား၏။ သား၏ မွေးနေ့သည် ဘယ်နှနှစ်မြောက်မွေးနေ့ပါလိမ့်။ သားဖြစ်သူ၏ နှစ်ဆယ့်တစ်နှစ်မြောက် မွေးနေ့သည် သူမအတွက် ပူလောင်သော မျက်ရည် များကို သယ်ဆောင်ပေးခဲ့၏။ အရပ်အလွန်ရှည်သော မာနခပ်ကြီးကြီး ချွေးမတစ်ယောက်ကို သား၏ နှစ်ဆယ့် တစ်နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှာ သူမ ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသားသည် သူမ ရှေ့မှောက် ရောက်နေသော သားပဲလား.. ထိုမွေးနေ့သည် ဘယ်နှကြိမ် လွန်မြောက်ခဲ့ပြီလဲ.. သူမ မသိ။
"နေစမ်းပါဦး.. ဘယ်နှနှစ်မြောက်မွေးနေ့လဲကွဲ့.. "
သား၏ သက်ပြင်းရှိုက်သံသည် လိုအပ်သည်ထက် ပိုရ်ျ ကျယ်လောင်သွားသည်။
"သြော်သြော် .. ဒါဖြင့် ဘုန်းကြီး အပါးလေးဆယ် ပင့်ပေါ့ သားရဲ့.."
"ဟာ.. မဟုတ်ဘူးမေမေ.. အိမ်မဆံ့ဘူး။ ဆယ်ပါးလောက်.."
သူမ တိုးတိတ်စွာ ရယ်၏။
" ဒါဖြင့်လည်း ပြီးရောပေါ့.."
လူသားတစ်ယောက်သည် လောကအတွက် ဘယ်အရွယ် အထိ လိုအပ်ပါသနည်း .. လူသားတစ်ယောက်သည် လောက၏ ၀ါးမြိုမှုကို ဘယ်အရွယ်အထိ အားတင်းပြိး ခံနိုင်ပါသနည်း။
ညစာစားချိန်တွင် အိမ်ရှေ့ခန်းဆီ တိတ်ဆိတ်သွားသည်။ ရထားတစ်စီးခုတ်မောင်းသွားသော အသံ ခပ်သဲ့သဲ့သည် တဖြည်းဖြည်း နီးလာ၏။ သူမ အခန်း၏ နံရံများ တဖြည်းဖြည်း တုန်ခါလာသည်။ ရောစးထားသံသည် ပို၍ပို၍ ကျယ်လောင်လာပြီး သူမ အခန်းဗဟို တည့်တည့်မှ ဖြတ်ခုတ်မောင်းသွားသောအခါ နံရံ၏ ကြွက်လျှောက်တန်းပေါ်မှ ဖန်ပုလင်းကလေးများ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ထိခိုက်သံပင် ထွက်ပေါ်လာ၏။ သူမကိုယ်ပေါ်မှာ ရထားဖြတ်သွားသည် ဟုထင်သည်။ သို့သော် သူမ အသက်ရှင်လျက် ရှိပါသေးသည်။
အခန်းထဲသို့ အရိပ်တစ်ရိပ် ၀င်လာ၏။ ထိုအရိပ်သည် ခပ်ပုပုပျပ်ပျပ်ဖြစ်သည်။ ထိုအရိပ်သည် ဆံပင်များ တွန့်ကွေးဖွာကြဲလျက် ရှိသည်။ ထိုအရိပ်နှင့်အတူ ငါးကြော်၏ ရနံ့ ကြက်သွန်ဖြူနံ့များ တွဲလျက်ပါလာ၏။ သူမ အော်ဂလီ ဆန်လာသော အချိန်တွင် ထိုအရိပ်ကို သူ တိုးတိုးကလေး မေးလိုက်သည်။
"မေမေက သမီးတို့ မေမေပေါ့"
ဖန်ချောင်းမီးရောင် ဖျက်ခနဲ လင်းထိန်သွားသောအခါ ခုတင်ပေါ်မှ မိန်းမသည် စူးစူးရှရှတစ်ချက် အော်လျက် ထထိုင်လိုက်သည်။ သူမရှေ့ စားပွဲ ပေါ်တွင် ထမင်းဟင်း ပန်းကန်များ တင်ထားသော လင်ပန်းတစ်ချပ်ရှိသည်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရှိသည်။ အနီရောင်ရှိသည်။ ဘယ်တုန်းကမှ မယဉ်ပါးသော ကြောင်နက် တစ်ကောင်ရှိသည်။
အဆင်အသွေးစုံသော ချည်ထည်ရောင်စုံများရှိသည်။ လက်ဖြင့်လှည့်ရသော ဗိုင်းငင်သည့် ရစ်ဘီးတစ်ခုရှီသည်။ ချည်မျှင်တန်းများကြား ဟိုဘက် သည်ဘက် ပြေးလွှားနေသော အနီရောင် ချည်ရစ်ထားသည့် လွန်းကလေးနှင့် အပြာရောင် ချည်ရစ်ထားသည့် လွန်းကလေးရှိသည်။ ချည်မျှင်ရောင်စုံများသည် အခန်းထဲတွင် တွဲလွဲကျလျက် ယိမ်းကသလို ညီညာစွာ လှုပ်ရှားနေကြသည်။
သမိးက လွှတ်ခနဲ အော်ကာ သူမဆီ ချက်ချင်းရောက်လာ၏။
သူမ၏ လက်က ပိုရ်ျ လျင်မြန်စွာ ပင့်ကူရှိရာသို့ အုပ်ကိုင်ထားလိုက်သည်။
" ဒီပင့်ကူက သူ့သားသမီးတွေ အတွက် အသက်ရှင်ဖို့ သေပေးရမှာ.. ခဏကြာရင် သူသေတော့မှာပါ.."
သို့သော် သူမ ညင်သာစွာ ကိုင်လိုက်သော ပင့်ကူသည် ပင့်ကူအမ မဟုတ်ဘဲ အထီးဖြစ် နေနိုင်သည်။ သူမသည် ပင့်ကူကို လက်မှ ကိုင်လျက် စေ့စေ့စပ်စပ် ကြည့်နေသည်။ ပင့်ကူအထီးနှင့် အမကို သူမ မခွဲခြားတတ်။ သူမ၏ ချစ်လှစွာသော ခင်ပွန်းသည် စာရေးဆရာကြီးများ ခွဲခြားတတ်လေမလား၊ သို့မဟုတ် သူမ၏ သား ဆရာဝန်များ ခွဲခြားတတ်မလား။ သို့မဟုတ် အထက်တန်းပြဆရာမ ဖြစ်သော သမီးက ခွဲခြားတတ်မလား၊ သို့မဟုတ်.. ထို့နောက် သူမသည် တိတ်ဆိတ်စွာ ရယ်မောလျက် ပင့်ကူကို လက်နှင့် ပုတ်ထုတ် ပစ်လိုက်လေသည်။
သမီးသည် ထမင်းပွဲလင်ပန်းကို သူမရှေ့သို့ အနည်းငယ် တိုးပေးပြီးနောက် ပြန်ထွက်သွား၏။ သူမသည် ထမင်းပန်းကန်ကို စိုက်ကြည့်သည်။ သူမ၏ ဘ၀တွင် ထမင်းဘယ်လောက်များများစားခဲ့ပြီးပြီလဲ.. သူမ၏ လက်သည် ထမင်းပန်းကန်များကိုကိုင်ကာ သားသမီးဘယ်နှယောက်ကို ဘယ်နှကြိမ် ခွံ့ကျွေးခဲ့ပြီးပြီလဲ.. သူမကိုင်လိုက်သော ထမင်းလုတ်တိုင်းကိုသားသမီးများအတွက်နှင့် သူမအတွက် ဟူ အချိုးချကြည့်လျင် မည်သည့်အချိုးက များနေပြီလဲ.. သူမသည် ထမင်းစားချင်စိတ် လုံးဝမရှိသောကြောင့် ထမင်း ပန်းကန်ကို ကြည့်ကာ မျက်ရည်ဝဲရလေသည်။ မျက်ရည် ဆိုသည်မှာ သူမ၏ ဘ၀တွင် သူစိမ်းပြင်ပြင်မဟုတ်ပါ။ အလွန်ရင်းနှီးသော မိတ်ဆွေဖြစ်သည်။ သူမခင်ပွန်းသည် ၀မ်းနည်းလျှင် သူမ မျက်ရည်ကျရောစးောစးသည်။ သားသမီးများ၏ ဝေ’နာများအတွက် သူမ မျက်ရည်ကျရည်။ သားသမီးများ၏ ဆုံးရှံးအားငယ်မှုများအတွက် သူမ မျက်ရည်ကျရသည်။ သို့သော် သူမကိုယ်တိုင်အတွက်တော့ သူမ မျက်ရည် မကျခဲ့ဖူးပါ။ ထို့ကြောင့်လည်း ယခုတစ်ကြိမ် တွင် သူမအတွက် ကျရမည့် မျက်ရည်သည် သူမဘ၀တွင် သူစိမ်းပြင်ပြင်သာ ဖြစ်သည်။
အပြင်မှာ တိတ်ဆိတ်ရန် အားယူစပြုလာချိန်တွင် အခန်းထဲသို့ အရိပ်တစ်ရိပ်ဝင်လာ၏။ ရှည်မျောသော အရိပ်သည် သူမ ခုတင်ဆီသို့ လျင်မြန်စွာ နီးကပ်လာသည်။
"ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက် မှောင်နေတာလဲ " ပြောပြောဆိုဆို တစ်ခုတည်းသော ပြတင်းပေါက် ပွင့်သွားသည်။
"ဘွားဘွား.. ထမင်းလည်း မစားသေးပါလား"
လူငယ်လေးသည် ခုတင်ပေါ်မှာ ထိုင်နေသော မိန်းမကို ရယ်ပြသည်။ သူမ ပြန်မပြုံးပါ။ သူမစားချင်သော ထမင်းကို ချွဲတတ်သော မြေးကလေးကသာ ခွံ့ကျွေးမည် ဆိုလျှင် စားသင့်သလား ဟု သူမ တွေဝေစွာ စဉ်းစားနေ၏။ သို့သော် မည်သူကမျှ သူမကို ထမင်းခွံ့ရန် စိတ်ကူးမရှိပါ။
"ဘွားဘွား.. ကျွန်တော့်မွေးနေ့လည်း ရောက်တော့မှာ"
"ဖေဖေက ကျွန်တော့်ကို ဂစ်တာ ၀ယ်ပေးမှာတဲ့။"
ဤလူကလေးသည် ဂီတကို ကလေးအရွယ်ကတည်းက သာယာတတ်သူဖြစ်သည်။ ဤမြေးကလေးအတွက် ကမ္ဘာပေါ်မှာ မရှိသော သီချင်းသံစဉ်များကို သူမ ရွတ်ဆို ညည်းခဲ့ရဖူးသည်။ သူမ ပင်ပန်းခဲ့ပါသလား.
"ဘွားဘွား .. ညီမလေးက ဘွားဘွားဆီ လာချင်လို့တဲ့.."
"အလိုတော်.. ရှုပ်ရှုပ် ယှက်ယှက်၊ မလာရဘူးလို့ ပြောလိုက်"
တစ်ခဏအတွင်း သာယာသော ရယ်သံလေးတစ်ခု သူမ အနီးမှာ ရောက်လာသည်။ ငွေဆည်းလည်း သေးသေးကလေး တစ်ခု ကောင်းကင်ဆီမှာ လှုပ်ခတ်နေသလို ထင်ရ၏။ အဖြူရောင် ဂါဝန်ပွပွကလေး၊ အနီရောင် ခေါင်းစည်းကြိုးကလေး၊ မြင်းမြီးပုံစံ ဆံပင် နီကျင်ကျင်ကလေး၊ ပေါင်ဒါနံ့ သင်းသင်းကလေး။ သူမ အိပ်မက်များကို တစ်စစီ ဖဲ့ခြွေပစ်သော သားသမီများလိုပင် စွမ်းအားရှိသော မြေးကလေး။
"မီးကို ပုံမပြောတာ ကြာလှပြီ ဘွားဘွားရဲ့."
သူမ ထိုအရွယ်တုန်းက သူမ မိဘများ ၏ ပုံပြင်ကို နားထောင်ခဲ့ရလေသလား .. စဉ်းစားတော့ ၀ိုးတ၀ါးသာ ထင်၏။ မအေ၏ ချည်ခင်ကို ယူဆော့မိ၍ ခေါင်းခေါက် ခံရတာ ဘယ်သူပါလိမ့်။ သူမသည် ခပ်တိုးတိုးကလေး ရယ်လိုက်သည်။
"ဘွားဘွား.. မီးကိုခေါင်းတုံး တုံးပေးတဲ့ ပုံပြင်ကလေး ပြောပြပါဦး။ "
တင်းမာအေးစက်သော စိတ်နှလုံးသည် တစ်စတစ်စ အရည်ပျော်သွား၏။
"ကဲ..ကဲ.. ဓာတ်ပုံ အယ်လ်ဘမ် တွေ ယူခဲ့"
ခဏ အကြာတွင် သူမခုတင်ပေါ် ဓာတ်ပုံများ ပြန့်ကျဲနေတော့သည်။ မြေးမလေး ခေါင်းတုံးတုံးစဉ်က ရိုက်ထားသော ဓာတ်ပုံ ကို သူမ ရွေးထုတ်လိုက်၏။ နာရီသံ သဲ့သဲ့ကြားရသည်။ ဘယ်နှချက် မှန်းမသိ။ ဘယ်နှကြိမ် ပြန်ပြောနေမှန်း မသိ။ နောက်ဆုံးတော့ မြေးကြီးက ကလေးမလေးကို ပွေ့ချီခေါ်သွားသော အခါ အခန်းသည် တိတ်ဆိတ်စွာ ကျန်ခဲ့သည်။ ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံများ .. အဖြူအမည်း ဓာတ်ပုံများ .. သူမသည် ပြန့်ကျဲနေသော ဓာတ်ပုံများကို စုသိမ်းဖို့ ကြိုးစားရင်း ပိုမို ဖြန့်ကျဲကာ တစ်ခုချင်း စေ့စေ့စပ်စပ် ကြည့်မိပြန်သည်။
ဓာတ်ပုံများသည် အဖြစ်အပျက်ပေါင်းများစွာ.. အခြေအနေပေါင်းများစွာကို သူမအား နည်းနည်းချင်းရှင်းပြပေးနေသည်။ သူမ ခင်ပွန်းနှင့် သူမ၏ ဓာတ်ပုံများ၊ သူမသားသမီးများနှင့် သူမ၏ ဓာတ်ပုံများ၊ သူမ မြေးများနှင့် သူမ၏ ဓာတ်ပုံများ၊ စိတ်ကျဥ်းကျပ်နေသော နေ့ရက်များ၊ အားတင်းထားရသော နေ့ရက်များ၊ ပျော်၇ွှင်ကြည်နူးရသော နေ့ရက်များ.. ။
ဓာတ်ပုံပေါင်းစုံကို ကြည့်ရောစးင်း သူမ၏ ဘ၀ဖြစ်ရပ်ပေါင်းစုံကို သူမ ပြန်လည်ရင်းနှီးရသည်။ သူမ၏ ဇနီးသည် ဘ၀ကို သူမ မြင်ရသည်။ သူမသည် စွမ်းအင်ပြည့်သော ဇနိးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူမ၏ မိခင်ဘ၀ကို သူမ မြင်ရသည်။ သူမသည် ကိုယ်ကျိုးစွန့်လွှတ်ကာ သားသမီး များကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့သော အောင်မြင်သည့် မိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူမ၏ ဘွားအေ ဘ၀ကို သူမမြင်ရသည်။ သူမသည် စိတ်ရှည် လက်ရှည် နူးညံ့သိမ်မွေ့သော ဘွားအေ တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
သို့သော် သူမသည် သူမကိုယ်တိုင်ကိုတော့ ရှာဖွေ မတွေ့ချေ။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူမသည် သူမကိုယ်တိုင် အဖြစ် တည်ရှိ ခဲ့သူ မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လူတစ်ယောက်သည် ကိုယ် ကိုယ်တိုင်၏ ဘ၀အတွက် တစ်ချိန်မဟုတ် တစ်ချိန်မှာ ဖြစ်တည်ခဲ့ဖူးသည်ဆိုလျှင် ထိုလူများထဲတွင် သူမ မပါဝင်ပါ။ သူမ၏ များပြားလှသော ဘ၀များတွင် သူမ၏ ကိုယ်ပိုင်ဘ၀ မပါဝင်ပါ။
သူမသည် ရုတ်တရတ် ရလာသော အသိတရားကလေးဖြင့် စိတ်သက်သာရာရသွားသည်။ သူမ၏ ဘ၀ကို သူမကိုယ်တိုင်ပင် ပြန်လည် ဖန်တီး ယူရမည်။ ထိုအခါ သူမ၏ ကိုယ်ခန္ဓာသည် ၀ါဂွမ်းကလေးတစ်စလို တိမ်တိုက်ကလေးတစ်ခုလို ပေါ့ပါးစွာ လွင့်မျောလာ၏။ တက်ကြွ ရွှင်လန်းလာသော သူမသည် အခန်းထောင့်သို့ တရွေ့ရွေ့လျှောက်သွားသည်။ ထိုနေရာတွင် ကြည့်မှန်တစ်ချပ်ရှိသည်။ သူမသည် သူမကိုယ်သူမ ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် ပထမဦးဆုံး လှုပ်ရှားမှုအဖြစ် မှန်ထဲသို့ ကြည့်လိုက်၏။
ရေငွေ့များ ပိတ်ဆီးထားသော မှန်ချပ်၏ တစ်ဖက်ကို လှမ်းကြည့်ရသကဲ့သို့ ခပ်ဝါးဝါးဖြစ်နေသည်။ ထိုမှန်ထဲမှ မျက်နှာတစ်ခုသည်လည်း ခပ်လှမ်းလှမ်း နှင်းငွေ့ကြားထဲမှ ထွင်းဖောက်ကြည့်ရသော မျက်နှာလိုပင် ဘာမျှ မသဲကွဲဘဲ မှုန်ဝါးလျက်ရှိသည်။ ထိုမျက်နှာတွင် မျက်စိ ရှိသည်။ နှာခေါင်းရှိသည်။ ပါးစပ်ရှိသည်။ အလွန်ပုံပန်းကျန လှပသော ပါးစပ်ရှိနေရမည်။ သို့သော် ထိုအရာများကို သူမမမြင်ရပါ။ သူမ မြင်နေရသည်မှာ အနားရစ် မသဲကွဲသောေ၀၀ါးသည့် မျက်နှာတစ်ချက်ပင် ဖြစ်သည်။
သူမသည် မှန်ထဲမှေ၀၀ါးလာသော မျက်နှာကို ငေးကြည့်လျက် မျက်ရည်များ လိမ့်ဆင်းကျလာသည်။ နောက်ဆုံးတော့ အချိန်ကာလသည် သူမကို ကောင်းကောင်းအနိုင်ရသွားပါပြီ။
သူမ၏ မိန်းမသား အဖြစ်ကို သူမ ဘယ်တော့မှ ပြန်မရနိုင်တော့ပါ။ အရာရာသည် သူမအတွက် နောက်ကျသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
Posted by Maw at 5:56 AM0comments
'D0wfxkav;udk 2004 avmufwkef;u yk*Hzkd&rfu udk,fh&JU *sL;awmhypfrSm wpfyk'fvkH; &amp;amp;dkufwifay;oGm;cJhwm ukd&DuGef'dkuf(0rf;) yg/ ckxdaus;Zl;wifaeqJyg/ onf0wfxk[m *sL;&JU 0wfxkwkdawG xJrSm udk,fhtMudKufqHk; 0wfxkvdkU ajymvdkU&ygw,f../
'Dwpfyk'fvHk;xJrSm t&amp;amp;if wke;fuawGvdk udk,foHk;oyfvkdwmav;awGyJ jzwfnSyfuwf vkyfxm;wmr[kwfbJ wpfyk'fvHk; zwf&rSmyg/
ydwfxm;aomwHcg;wpfcsyfudk MumjrifhpGm ai;pdkufMunfhwwfaom tavhtusifhwpfckudk rMumao;rDu &cJhonf/
tcef;wHcg;udk zGifhxm;vQif jzpfEdkfifaomfvnf; ydwfxm;zdkUudk qE´ydk&SdaomaMumifh tNrJvdkvdk ydwfxm;cJh\_/ tcef;tjyifbufavSum;qDrS jzwfoef;oGm;aom ajcawmufrsm;pGmudk rjrifvdkaomaMumifh[k udk,fhudk,fudk rcdkifvkHpGm taMumif;jycJhygonf/ cGmjrifhzdeyfpD;xm;aom ajcawmufrsm;? ckHxl; ,dk;',m;zdeyfpD;xm;aom ajcawmufrsm;.. þt&mrsm;onf wpfOD;wpfa,muftwGuf taESmifht,Sufjzpf rjzpf raocsmaomfvnf; uRefruawmh &Iwf&Sufcwfaeaom ajcawmufrsm;udk MunfhrdvQif rl;a0vmwwfonf/ avSum;xdyfESifh uyfvsuftcef;rSmaexdkifrdonfhtwGuf ajcawmufrsm;pGmudk jrif&amp;amp;aomtcg uRefrudk,f uRefr tjypfwifvdkufrdao;onf/ odkUaomf NcH0if;a&SU b,fbufvrf;rodkU rsufESmrlaeaom tjcm;tcef;wpfckckudk ra&amp;amp;G;cs,frdcJhaomaMumifh udk,fhudk,fudk rMumcPaus;Zl;wif&amp;amp;ygonf/ jywifa;ygufrSaeí pufbD;rsm;? rsufESmrsm;? vufrsm;? ajcawmufrsm;udk jrif&onfESifhpmvQif opf&Gufajcmufrsm; opf&amp;amp;Gufpdrf;rsm;? yef;yGifhrsm;ud jrifae&onfu ydkí auseyfp&amp;amp;amp;amp;amp;amp;maumif;onfr[kwfvm;/
uRefrtcef;\_ wpfckwnf;aom jywif;aygufonf NcHH0if;taemufbufodkU rsufESmrlvsuf&SdNyD; jywif;aygufudk uRefrtMudKuf Zmcef;qD;yg;yg;vSyfvSyfuav; wyfqifxm;onf/ uRefr\_ Zmcef;qD;av;onf tif'&amp;amp;l;0dkif,uf\_Zmcef;qD;avmuf El;nHUodrfarGUjcif;r&Sdaomfvnf; t&amp;amp;m&mwGif tqifrajyaom vlwpfa,muftzdkU &ifckef,pfrl;zG,f&m jzpfvmcJh\_/
Zmcef;qD;\_ yef;yGifhyef;EG,f &amp;amp;dyf&dyfuav;rsm;udk a&amp;amp;wGufae&if; t&,ftNyKH;enf;yg;aom EIwfcrf;yg;yg;av;tpkHudk jyefvnfowd&vmzl;onf/ aemufNyD; pHum;yGifhuav;rsm; tjrifhrS csmcsmvnfum a0h0JusvmykHudk &amp;amp;dkufjyxm;aom jrefrm&kyf&Sifum;wpfckxJrS cspfpzG,fjyuGufuav;wpfckudk jyefvnf jrifa,mifvmzl;onf/ Zmcef;qD; vl;vGefUyGwfwdkufoHudk em;axmif&amp;amp;if; ykZOf;&ifuGJaumif ao;ao;uav;rsm;udk zrf;NyD; zefbl;xJxnfhcJhzl;onfh uav;b0wkef;u tjzpftysufwpfckudk owd&amp;amp;vmzl;onf/ rdk;apGiSufuav;wpfaumif r,fZvDyifajc&amp;amp;if;rSm atmfjrnfaeaom toHpl;pl;uav;wpfckudk Mum;a,mifvmzl;onf/ Zmcef;qD;uav; a&GUvsm;oHatmufwGif vGefcJhonfhESpftenf;i,fu arT;zl;aom yef;&amp;amp;eHUwpfck jyefvnfarT;ysHUvmwwfao;\_/ vGefcJhoaom q,fESpfcefUu toHrsm;vnf; yg0ifonf/
rSwfpka&;raeaom tcsdefrsm;? tdrfodkU pma&;raeaom tcsdefrsm;? pmtkyfwpfckckudk zwfraeaom tcsdefrsm;wGif ckwifay:rSm xdkif&amp;amp;if; jywif;aygufudkzGifhNyD; cef;qD;av; vIyf&rf;aeonfudk tMumMuD;MunfhaecJh&onf/ tazmf[lírnfrnf&&a&wGufp&mr&Sdaom uRefrb0wGif cef;qD;pNzLNzLav;ESifh a&eH&nf0aeaom eufausmausmjywif;aygufav;onfom uRefrcspfolrsm;jzpfcJhonf/
cspfol[laom a0g[m&amp;amp;wpfckonf uRefrtawG;xJodkU cyfi,fi,ft&G,fuwnf;u rMumcP0ifa&mufvmwwfaomfvnf; ykHo@mefrxif&Sm;aom t&amp;amp;dyfta&mifwpfckckudk ta0;uMunfhae&ovdkygyJ/ tcspf\_ykHpHudk o&amp;amp;amp;amp;amp;amp;kyfaz:MunfhzdkU pdwf0ifpm;aom t&G,fwkef;uawmh b,fvdkrsm;ygvdrfh[k trsKd;rsKd;awG;awm ,lcJhzl;\_/ odkUaomf aygaMumifaMumif pdwfvIyf&Sm;rIwpfrsKd;jzpfaerSmygyJav[k tqkH;owfvdkuf&aom tMudrfrsm;pGmjzpfvmaomtcg pOf;pm;MunfhzdkU pdwfr0ifpm;awmhacs/ olwdkUu ajymcJhwmuawmh wpfcsdefcsdefrSm cspfol&vmrSmygyJwJh/ þpum;udk vufcHzdkUodyfrvG,fulaomfvnf; pdwf0ifpm;p&amp;amp;maumif;aom pum;wpfcGef;jzpfonfudkawmh rNiif;Edkifyg/
tif;.. wpfa,mufwnf;aom wG,f&mrJhtrsKd;orD;twGuf vufwGJzdkU vlwpfa,mufa,mufudk ac:wmvm;/ &kyf&SifvufrSwfwef;pDzdkU cufcJaomvlwpfa,muftwGuf wef;pDay;rnfh vlwpfa,mufvnf;jzpfEdkifonf/ rdef;uav;wpfa,mufwnf; vrf;avQmufoGm;zdkU roifhawmfaom ncsrf;tcsdefrsm;wGif ab;u apmifha&Smufoltjzpf vdkufygay;rnfh vlwpfa,mufudk cspfol[kac:vdrfhrnf/ aoG;ysufzG,f&amp;amp;m pmar;yGJrsm;udk &amp;amp;ifqdkif&wdkif; ]]'DvkdajzcJhw,f r[kwfvm;? atmifygw,fuGm? 'DavmufajzEdkif&if atmifwmyJ}} [k ESpfodrfhtm;ay;rnfholwpfa,mufudk cspfol[k ac:vdrfhrnf/ ]] aeprf;ygOD;uG.. rif;u [dkacG;om;udk NyKH;jypum;ajym&avmufatmif 'Daumifu...}} [k remvdk0efwdkpGm atmf[pfypfrnfhvlwpfa,mufudk cspfol[k ac:vdrfhrnf/ tultnDay;jcif;? 0efwdkrIay;jcif;udk cspfol[k owfrSwf&awmhrSmvm;/ tif;av.. rdef;uav;\_ at;pufaom yg;jyifav;rsm;udk aEG;axG;vmatmif? nId;EGrf;aom EIwfcrf;av;wkdUudk vef;qef;awmufyvmatmif tJ'D cspfolqdkwmu wwfpGrf;vdrfhrnf/ odkUayr,fh 'Davmufvdktyfcsufav;awGudk jznfhpGrf;ay;wwf&amp;amp;kHrQjzifh olpdrf;wpfa,mufduk cspfol[k owfrSwfzdkUawmh tenf;i,fNiif;qdkzG,f&m&Sdygao;onf/
cspfolwpfa,muf&&SdzdkUrSm xdkvludk uRefrcspfzdkUvnf; vdkrSmyJr[kwfvm;/ cspfzdkUqdkwmuvnf; t&amp;amp;dk;qkH;ajym&vQifawmh olUrsufESmudkMunfhrd&amp;amp;amp;amp;amp;amp;if &,fcsifraezdkU? aemufNyD; ESmacgif;&IHUraecsifzdkU? aemufNyD; cg;oufoufcHpm;rae&amp;amp;zdkUyJaygh/ olu uRefrudk pdkufMunfhvQif uRefr raewwfrMunfh&JjzpfNyD; rsufvTmcsypfcsifvm&rnf/ olUrsufvkH;rsm;onf uRefr MumjrifhpGm &amp;amp;ifqdkifrMunfh0HUavmufatmif nIdUEdkifpGrf;&rnf/ olursm; pum;ajymvQif uRefr ESvkH;ckefjrefpGm t"dyÜm,frJhai;arm rdavmufatmif pdwfvIyf&Sm;vm&amp;amp;rnf/ tdk.. tJ'Dvdk uRefr rdef;rl;pGJvrf;&r,fh qGJaqmifEdkifolwpfa,mufa,mufudk b,fursm; &SmvdkUawGUEdkifrSmvJuG,f../ olwdkUu ajymcJhwmuawmh uRefr wpfcsdefcsdefrSm cspfol&vmrSmyJwJh/
wpfcgwpfcgawmh uRefr cspfol[m b,fvdkykHpHrsKd;&SdrSmygvdrfh[k pdwful;,OfawGMunhfzl;ygonf/ ]]&amp;amp;uf bwfwvm}} vdk t&m&mudk xGif;azgufodjrifwwfNyD; oa&mfovdkvdk xyfaxhaxhtNyKH;ESifh tNrJtEdkif&amp;amp;aewwfaom cyf&dkif;&dkif;vlwpfa,mufrsm;vm;/ ]]uGd}} vdk rsufrSef0dkif;wwfxm;NyD; vlrIqufqHa&; tvGefnHUzsif;aomfvnf; [efaqmifrIuif;rJhaom OmPfxufjrufonfh cyfaMumifaMumifvlwpfa,mufrsm;vm;/ vlwumudk av;pm;pGm acgif;nGwfEIwfqufwwfaom uAsmq&amp;amp;m[k trnfcHxm;onfh ,dkifeJUeJUvlwpfa,mufrsm;vm;/ ('gayr,fh aeyl'PfaMumifh aysmhtdauG;nGwfaeaom za,mif;wdkifrsm;udk jrifrdvQifyif tm;rvdktm;r& pdwftaESmuft,Sufjzpfwwfaom uRefrtzdkU onfvdk aysmhnHHUnHU vlrsKd;udkvnf; b,fawmhrS cspfoltjzpf cH,lvdkU&rSm r[kwfygbl;av)/ avaumif*sif0dkif;ESifh zJ0dkif;wdkUwGif tNrJusifvnfaeNyD; OmPfodyfaumif;aom tvkyfoifq&m0efwpfa,mufrsm;vm;.. awG;awm&amp;amp;if; pdwful;&if;ESifh ESPfq,fhav;ESpfajrmufarG;aeUudk vGefajrmufvmaomtcg &amp;amp;,fp&m awmfawmfaumif;oGm;ygonf/
uRefrudk vma&mufcsf;uyfcJhaom a,musfm;tcsKdUudk cspfoljzpfzdkU ten;fi,frQpdwful;r0ifcJhrdjcif;aMumifh uRefr aemifwr&yg/ wpfcgwpfcgawmh (odyfysif;vQif) xdkvlrsm;udk jyefvnfawG;awmMunfhrdonf/ emrnftu©&amp;amp;mtpDtpOftwdkif; pOd;pm;zdkU 0dk;w0g;jzpfaevQif ESpfumvtvdkufpDpOfNyD; i,fi,fwkef;utp enf;enf;touft&G,f&vmcsdeftxd jyefawG;awmh rsufESmwpfcsKdUudk rSwfrdvmonf/ rsufrSefwyfxm;aom rsufESmESpfckvm;? okH;ckvm; raocsmyg/ wpfa,mufu rsufrSefudk wyfxm;vdkuf? cRwfxm;vdkufvkyfwwfaomaMumifhjzpfonf/ omrefrsufESm? omrefxuf tenf;i,f &kyf&nfcsKdUwJhaomrsufESm? NyKH;aeaom rsufESm? NyKH;jcif;&amp;amp;,fjcif;uif;rJhaomrsufESm? tenf;i,fxltrf;aom EIwfcrf;rsm;? yg;vSpfaom EIwfcrf;rsm; (vSyaom EIwfcrf;wpfckudk ,ckxd ESpfoufqJjzpfaomfvnf; EIwfcrf;vSvSav; &Sdae&kHrQjzifh cspfoljzpfrvmEdkifbl;av/) pdwfoabmcsif; wdkufqdkifrvm;vdkU [laompum;jzifh vufxyfcGifhawmif;ol? (Munfhprf;ygOD;uG,f? pdwfoabmxm;csif; b,fhES,fwlEdkifrSmvJ/uRefru OD;rnGwfwwfol? rdwfaqGxuf &efvdkolu aygrsm;ol? olwdkUu av;pm;ojzifh OD;nGwfwwfolrsm;? &efvdkolxuf rdwfaqGu aygrsm;olrsm;) oem;cspfeJU cspfwm[k qdkvmolu wpfa,mufESpfa,muf/ eifwpfa,mufwnf; &amp;amp;kef;uef&yfwnf touf&Sif&amp;amp;wm ryifyef;bl;vm;? rNiD;aiGUbl;vm;? ab;u twl&ifqdkifzdkUwJh/ oGm;prf;yg/ tcspfrSm tultnDqdkwm r&Sdygbl;/ wpfa,mufu txifMuD;wmu pcJhwmygwJh/ bk&amp;amp;m;a&.. rdef;rwpfa,mufudk txifMuD;udk;uG,fwwfwJhvlwpfa,mufudk tJ'Drdef;ru bmawGrsm; aumif;csD;ay;vdkuf&rvJ/
wpfpkHwpfa,mufudk cspfolvkyfzdkUqdk&mrSm tJ'Dvludk uRefruomvQif txifMuD;av;pm;zdkU vkdtyfrnfr[kwfvm;/ i,fpOfwkef;uawmh ]]vlwpfOD;wpfa,mufcsif;&amp;amp;JUa&m*ga0'emudk ukozdkUxuf EdkifiHwpfEDkifiH&JU a&m*ga0'emudk ukozdkUu ta&;MuD;ygw,f/}} [laom q&m0ef awmfvSefa&amp;amp;amp;amp;amp;amp;;orm;vdkvlrsKd;udk txifMuD;cJhzl;onf/ ,ckvdk touft&G,f&vmonfhtcgrSawmh wpfa,mufa,mufudk txifMuD;av;pm;zdkU odyfcufcJoGm;cJhNyD/
aowrf;pma&amp;amp;;NyD; rSmMum;xm;&pfcJhzdkU wpfa,mufa,mufrQ rusefcJh&amp;amp;amp;amp;amp;amp;ifawmh ao&rSm tenf;i,fysif;ajcmufajcmufEdkifrSmyJ/ 'gayr,fh odyfvdktyfvSwm r[kwfygbl;av/
uRefrtem;rSm pum;oifump cspfpzG,f Muufwla&amp;amp;G;av;wpfaumifawmhvdktyfrnf/ Muufwla&G;uav;udk uRefr\_ emrnfac:wwfatmif oifay;xm;&rnf/ olUudk trsm;uac:ovdk a&amp;amp;TcJ [krac:yJ ]]atvdef;}} [kac:&rnf/ (uRefrodyfoabmusaom jyifopf&amp;amp;amp;amp;amp;amp;kyf&Sifrif;om;emrnfudk atvdef;'DvGef[k uRefrtoHxGufygonf/) atvdef;u aygifrkefUrS MudKufwwfyghrvm;/ uRefr ckwavmxrif;rpm;yJ aygifrkefUESifhaumfzDyJaomufaeonf/ odyfpyfpkwwfaom abmf'gaqmifae trsKd;orD;wpfa,mufu tHhMowMuD; ]]xrif;rpm;yJ aeEdkifw,faemf}} [k a&amp;amp;&Gwfwkef;u ]] ydefatmifvdkU? udk,ftav;csdefavsmhatmifvdkU}} [k ajzvdkufcsifaomfvnf; tvGeftrif;ydefvsaom udk,fhudk,fudk jyeftm;emojzifh xrif;rpm;csifvdkU[k ajzvdkufzl;onf/ tif;av.. xrif;p&dwfxuf aumfzDESifh aygifrkefUp&amp;amp;amp;amp;amp;amp;dwfu ydkrdkoufomonf[k ajzvdkUraumif;bl;r[kwfvm;/ aeprf;ygOD;av/ atvdef;udk bmpum;awG oifay;&rvJ/ ]]b,folvJ}} [laompum;ESifh ]]olcdk;}} [laompum;ESpfckqdkvQif vkHavmufNyDvm;/ &amp;amp;,farmwwfatmif oifay;vdkU&vQifvnf; atvdef;&,farmoHudk em;axmifcsifao;onf/ vlawG &,farmoHvdk cyfatmufatmuftoHrsKd; atvdef;rSm r&SdEdkif/ atvdef;udkygxnfhwGufvQif uRefrtcef;usOf;uav; awmfawmfjynfhpkHoGm;vdrfhrnf/
ckwifao;ao;av;wpfckonf jywif;ESifhuyfvsuf tcef;wpfzuftpGef;wGif &Sdaernf/ wpfESpfaerS wpfcgESpfcgudkifjzpfaom pdyfykwD;uav;u ckwifacgif;&amp;amp;if;wGif csdyfvsufom;&Sdaernf/ tcef;onfbufpGef;rSm pm;yGJcif;rygaom pm;yGJwpfvkH;? opfom;ukvm;xkdifwpfvkH;? pm;yGJay:rSmawmh jyifypmtkyf wpftkyfwavESifh rSwfpkpmtkyfuvGJNyD; bmrQr&Sd/ bmom&amp;amp;amp;amp;amp;amp;yfqdkif&m pmtkyfxlrsm;udk ckwifajc&amp;amp;if;u xif;&SL;aowåmxJrSmyJ xm;avh&Sdonf/ xif;&SL;aowåmay:rSm a&amp;amp;aEG;"gwfbl;/ aumfzDazsmfonfh rwfcGuf? EdkUqDAl;? aumfzDrkefUbl;/ tcsKdaomufyef;uefwpfpkHESifh aygifrkefUrkefUMuGwfxnfhonfh EdkUrkefUbl;cGHESpfck? a&amp;amp;aEG;a*gufwpfck? aowåmab;rSm aomufa&amp;amp;tdk;i,fav;wpfvkH;&Sdonf/ aowåmESifhuyfvsuf ajc&amp;amp;amp;amp;amp;amp;if;eH&HrSm yifhulydk;rQif&amp;amp;pfwG,faeNyD; &GJUapmif;aeaom yef;csDum;wpfcsyf &Sdonf/ olUatmufrSm ta&mifjy,fvGifhí zGmaeaom 1975 ckESpfxkwf jyu©'defta[mif;wpfck&Sdonf/ uRefrt&if onftcef;rSm aeoGm;olonf yef;csDESpfoufol jzpfcsifjzpfrnf/ eH&HrSm ajrjzLESifh pma&;zdkU 0goemygoljzpfcsifjzpfrnf/ &amp;amp;GJUapmif;aeaom yef;csDum;udk jyefvnfwnfhrwfzdkU tMudrfMudrfpdwful;zl;aomfvnf; t&amp;amp;yftifrwefedrfhaom uRefrtzdkU ukvm;xdkifudk a&TUae&rSm aocsmaomaMumifh onftwdkif;yJ xm;cJhrdonf/ wpfcgwpfcgawmh &amp;amp;GJUapmif;aeaomt&mwpfckudk Munfh&wmudku aysmf&amp;amp;TifzdkUaumif;\_/ eH&amp;amp;HwGif ]]b0qdkwm &kef;uefrIyJ}} [k t"dyÜm,f&Sdonfh pmaMumif;wpfck&Sdonf/ olonf uRefrenf;yg; tqifrajyol? &amp;amp;kef;uef&ol jzpfEdkifygonf/ ]]awmifxdyfudkra&amp;amp;amp;amp;amp;amp;mufcif awmifatmufudk rMunfheJU}} [laom jrefrmpmaMumif;wpfckvnf;&Sdonf/ olonf awmifay:ra&amp;amp;amp;amp;amp;amp;mufcif vrf;wpf0ufrSm vdrfhuszl;ol jzpfcsifjzpfrnf/ emrnfESpfckudkvnf; eH&HrSma&amp;amp;amp;amp;amp;amp;;xm;onf/ pdwf0ifpm;zG,f emrnfrsm; r[kwfyg/ &kyf&Sifrif;om;emrnfrsm;vnf; jzpfEdkifrnfrxifyg/ olUcspfolawGjzpfcsifjzpfEdkfi\_/
atvdef;a&mufvmvQif olUavSmifcsKdifhudk b,frSm csdyf&amp;amp;amp;amp;amp;amp;ygh/ pmMunfhpm;yGJtxufrSm csdwfxm;vQif uRefr rSwfpka&;aecsdefü olu ikHUMunfhNyD;&amp;amp;,farmaervm;/
ysif;&amp;amp;dzG,f&mrdk;aygufrsm;\_ toHatmufwGif usOf;ajrmif;aomtcef;uav;xJü zefrD;vkH;\_ 0gazsmhazsmhtvif;a&amp;amp;mif? idkufjrnf;aeaom Muufwla&G;wpfaumif? wzswfzswfvIyfcwfvsuf&Sdaom Zmcef;qD;wpfckESifh ckwifay:rSm rvIyfr,Sufxdkifai;aeaom ao;ao;nSufnSuf trsKd;orD;wpfa,muf../
aomhaygufrS acsmif;MunfhaeolwpfOD;onf onfjrifuGif;rsKd;udk wpfrdepfxufydkíMumatmif Munfhcsifyghrvm;/
uRefrtaMumif;udk olwpfyg;tm;jyefvnfajymjyvdkolwpfa,mufonf ]]t&amp;amp;yftvGefedrfhaom}} ]]pum; tvGef&Sm;yg;aom}} ]]tm;remwwfaom}} [lonfh emr 0daooersm;udk tokH;jyKvdrfhrnfxifonf/ xdkpum;rsm;xuf jynfhpkHzdkUvdktyfao;\_/
*pfwmwGif atmufqkH;uao;rQifaom? wif;rmaom? pl;&Saom ]]wpf}}MudK;onf uRefr jzpf\_/ zJMudK;wyfqHyifESifh b,fawmhrS OD;rnGwfaom aumfywf&amp;amp;kyfuav;onf uRefr jzpf\_/
zkH;uG,fxm;aom t&amp;amp;mwpfckudk tvGeftrif;zGifhMunfhvdkaom vltrsKd;tpm;xJwGif uRefr ryg0ifyg/ ckdrsm;udk tpmauR;zdkUESpfoufonf/ odkUaomf cdknnf;oHudk tvGefrkef;\_/ wpfcsdefwkef;u ESifh;qDyef;rsm;udk cspfwwfcJhaomfvnf; ,cktcsdefwGif aygrsm;vGef;aom ESif;qDFyef;wkdUudk rkef;aeNyDjzpf\_/ uRefronf &Sm;yg;aomt&mudkom cspfwwfoljzpfygonf/ vGJcsdefnDnDvIyf&amp;amp;amp;amp;amp;amp;rf;aeaom em&DcsdefoD;wpfckudk ai;arm&amp;amp;if; vufzuf&nfaomufcsifoljzpf\_/ bwfpfum;pD;zdkUxuf ajcusifvrf;avQmufzdkU pdwf0ifpm;oljzpf\_/ odkUaomf vrf;avQmufzdkUxuf tcef;usOf;usOf;av;xJrSm xdkifaezdkU ydkí qE´&Sdonf/ (trSefpifppf vrf;avQmufonfhtcg uRefraemufu t&amp;amp;dyfwpfck jzpfay:raeatmif rnfodkUumuG,f&rnfenf;[k pOf;pm;&if; tcef;xJrSm xdkifaeonfh tusifhudk&cJhonf/) uRefr t&dyfrsm;udk rkef;wwf\_/ uRefr rkef;aom t&dyfrsm;onf uRefraemufrS &Snfvsm;vsm;ykHpH? yk0dkif;0dkif;ykHpH? apGapmif;apmif;ykHpHjzifh vdkufygvmwwfaomaMumifh jzpfygonf/
uRefronf 'l;,m;pD;u&uf\_ rD;pGJavmifaeaom&eHUudk oabmusonf/ rqkH;jzwf&amp;amp;JaomaMumifh qkH;&IH;&jcif;xuf tqkH;tjzwfrSm;í qkH;&amp;amp;IH;&jcif;udk vdkvm;onfqdkaom Zmwfvdkufrsm;udk oabmusonf/ wpfckckudk vdrfnmzdkU pdwfr0ifpm;aomfvnf; vQdKU0SufzdkU pdwf0ifpm;wwfonf/ &amp;amp;if;ESD;rI'Pfudk rcHEdkifaom a,musfm;om;rsm;twGuf 0rf;enf;pum;qdkzdkU 0efav;wwfoljzpfonf/ &Hzef&HcgwGif vspfvsL&amp;amp;amp;amp;amp;Iwwfol? onf;cHpdwf&SnfEdkifpGrf;ol? odkUaomf &Hzef&HcgwGif vufpm;acswwfoljzpfonf/ uRefrudk em;vnfonf[k ajymolonf tMuD;tus,fvdrfnmaejcif;om jzpfvdrfhrnf/ uRefronf wpfpkHwpfa,muftwGuf jyXmef;pmtkyf r[kwf/ uRefrudk zwf&I&ef b,folUrSmrS tbd"gefr&Sd/
uRefr\_ tMuD;rm;qkH;aom cRwf,Gif;csufwpfckrSm aysmf&TifESpfodrfhzG,f&m umvrsm;xuf emMunf;zG,f&m umvrsm;udk ydkrdkrSwfrdwwfjcif;jzpfonf/ &kyf&SifxJu avqma&amp;amp;amp;amp;amp;mifjcnfaoewfudk rMumcP owd&aewwfonf/ vufzuf&nfpm;yGJwpfckwGifvlwpfa,mufrsufESmudk *i,fykHpH uGJoGm;atmif vufzuf&amp;amp;nfyef;uefjym;jzifh ayguf&dkufypfcJhaom yef;csDq&amp;amp;mwpfOD;udk uRefr csD;usL;yg\_/ vlqdkonfrSm udk,fhvGwfvyfcGifhudk xdyg;í apmfum;vmvQifawmh vufwkefUjyefzdkU vdktyfonfr[kwfmvm;/ cufaeonfrSm uRefru aoG;jrifvQif rl;wwfjcif;yifjzpfonf/
rdk;oufavESifhtwl vGifhaeaom jywif;cef;qD;atmifrS jzwfvsuf rmvum&Gufajcmufwpfck 0JvGifhusvmcsdefü rmvum&Gufajcmfuvdk cyfvdrfvdrfrsufESmwpfckudk jyefvnfjrifa,mifoGm;\_/ tJ'D rmvum&GufESifhwlaomrsufESmonf uRefrtay:rSm rvdkrkef;xm;pdwfjzifh twif;ajymcJhol\_ rsufESmjzpfonf/ olrsufrSefwyfxm;onf/ rsufrSefwyfxm;NyD; bmrS rjrifwwfolwpfa,mufESifh pum;NydKifqdkifajymzdkU uRefrpdwfr0ifpm;yg/ vlwpfa,mufudk aemufrSaeí tvpfacsmif;&dkufwwfaom owå0gtrsKd;tpm;udk vl[kac:&rSm enf;enf;pOf;pm;zdkUaumif;\_/ t&nftcsif;wpfckudk vufcHzdkU ,SOfNydKifupm;yGJwpfck vdktyfrnfxifvQif ,SOfNydKifzdkU oabmwlhygonf/ tm;upm;pdwf"gwfqdkwm &amp;amp;IH;edrfholrsm;\_ vufokH;pum;ygwJhav/ &amp;amp;IH;oludk vufjzwfaMu;? odkUr[kwf wpfoufvkH; uRefcHaMu;/ odkUr[kwf owfaoaMu;? b,fhES,fvJ/ vGifhpifvmaom rmvum&Gufajcmufudk vufxJrSm qkyfajcypfvdkufaomtcg aMurGoGm;avonf/
xdktcdkuf jywif;cef;qD;Mum;rS rdk;a&amp;amp;pufudk awGU&onf/ rdk;&GmjyefNyDvm;/
rdk;&amp;amp;GmaepOf tjyifxGufvrf;avQmuf&jcif;onf tifrwef pdwf0ifpm;zG,faumif;onf/ rdk;pufrdk;aygufrsm; uRefrxHajy;0ifvmykHudk oabmus\_/ vIdif;rsm;ajy;vmovdk rdk;zGJuav;rsm;ajy;vmvQif toHwpfck wGJygvmwwfonf/ aeaumif;&amp;amp;JUvm;...wJh/ uRefr odyfESpfoufaom EIwfcrf;yg;wpfpkHrS eIwfqufavh&Sdaom tenf;i,fatmí wdrfcsifaomtoHwpfckjzpfonf/ tJ'Dvlwpfa,mufonf uRefrxH pma&amp;amp;;vQifvnf; aeaumif;&JUvm;[k t&ifa&;wwfonf/ olUtoHMum;vQif vrf;avQmuf&wm ydkí aysmfp&amp;amp;amp;amp;amp;amp;maumif;vmonf/ t&dyfjzpfay:jcif;rS uif;vGwfaomaMumifhvnf; rdk;a&xJrSm vrf;avQmufjcif;udk uRefr ESpfoufygonf/
odkUaomf ckaevrf;avQmufvQif uRefr rawGUcsifolrsm;udk vrf;rSmjzpfjzpfawGUoGm;Edkifonf/ naeajcmufem&DausmfvQif vufzuf&nfqdkifxdkifwwfolrsm; jzpf\_/ rjrifwmMumNyDaemf[k EIwfqufrnfholrsm;jzpf\_/ b,fhES,fvJ ajzEdkifw,fr[kwfvm;[k EIwfqufrnfholrsm;jzpf\_/ uRefrqHyifxufrS jyKwfusoGm;aom py,fukH;av;udk erf;yg&amp;amp;ap[k cGifhawmif;cJhzl;onfh cyfaMumifaMumifvlwpfa,mufESifh awGUEdkifao;onf/ tJ'Dvludk NyKH;jyzdkU odyfcufcJwmygyJ/ olUudkjrifvQif uRefrrsufESmudku tvdkvdk &amp;amp;IHUwGoGm;rnfxifonf/ uHqdk;vQif ]]rdrdtxuft&m&SdESifhywfouforQ atmufajcodrf;aqmifMuOf;ay;jcif;udk *g&amp;amp;0w&m;jzpfonf}} [k a&maxG;ajymcJhzl;olwpfa,mufESifhyif qkHEdkifonf/ uRefrawGUzl;aom yg;pyfrsm;xJrSmawmh olUyg;pyfonf teHqkH;jzpf\_/ olUudkawGUvQifawmh uRefr cyfa0;a0;rS cGmí oGm;ygonf/ (tnpftaMu;rsm;onf tom;csif;xdvQif? tusDFpcsif;xdvQif tjcm;wpfa,mufxH vsifjrefpGm ul;pufwwfaMumif; uRefrod\_/ wpfpkHwpfa,mufESifh xdrdwdkif;xdrdwdkif; xdrdonfhta&amp;amp;jym;udk qyfjymjzihf av;ig;cgxyfaq;aMumypfwwfaom pdwfa&m*gonf rav;wpfOD;udk uRefr trsm;enf;wl r&,farmcJhwmaocsmygonf/) 'ghxuf uHqdk;vQif uRefawmfu qif;&amp;amp;Jom;awG? awmifolawGtaMumif;a&;wJh b0o&kyfazmf 0xåKrsdK;rS oabmuswm[k a,mifwda,mifuef; ajymwwfolwpfa,mufESifhyif awGUEdkifonf/ qif;&amp;amp;Jwm wpfckwnf;[m b0r[kwfygbl;[k uRefru aqG;aEG;vQifvnf; em;vnfrnfhvltrsKd;tpm;rsKd;r[kwfyg/
tif;av.. b,frS rxGufawmhygbl;/ pmzwfzdkUtaMuG;awG usefao;onf/
ckwifay:rS Murf;jyifay:ajccsvdkufpOfrSmyif avSum;rS wufvmaom cyfzGzGajcoHwpfck Mum;vdkufonf/ cGmjrifhzdeyfoHr[kwf? ,dk;',m; zdeyfoHr[kwf? &amp;amp;mbmcH om;a&zdeyfoHrsKd;jzpfEdkifonf/ a,musfm;zdeyfoHjzpfvdrfhrnf/ b,fvdkygvdrfh/ rD;jyiform;vm&amp;amp;atmifuvnf; rD;jywfraeyg/ rDwmzwfzdkU vlwpfa,mufa,mufrsm;vm;/EGm;EdkUydkUonfh vli,fav;\_ zdeyfoHvnf; r[kwfyg/ naeajcmufem&amp;amp;D pmydkUorm;vnf; rvmygbl;av/ ajcoHonf ysOfcif;Murf;ay:eif;vm&amp;amp;if; [dkbufu tcef;rsm;&Sd&amp;amp;amp;amp;amp;amp;modkU roGm;bJ uRefrtcef;bufodkU auGUvmonfhtcg uRefr &kwfw&uf rwfwyf&yfvdkufrdawmh\_/ ajcoHonf &amp;amp;amp;amp;amp;amp;GUH&nfxJrS jzwfoef;vmcJh&aom zdeyf\_toHrsKd;jzpf\_/ pdkpGwfonfh zdeyfoHjzpfonf/ wHcg;zGifhay;vdkufvQif b,fvdkrsufvkH;rsKd;udk awGU&rvJ/
ajcoHonf tcef;a&SUrSm &amp;amp;amp;amp;amp;amp;yfoGm;\_/ odkUaomf wHcg;acgufoH xGufrvmyg/ tjyifbufuvnf; NidrfoufaeNyD; uRefrtcef;xJrSmvnf; Nidrfoufaeonf/ ol aomhaygufrS acsmif;Munfhaeovm;/ cPMumawmh ajcoHudk Mum;&jyefonf/ jyefvSnfhxGufoGm;aom ajcoHjzpfavonf/ uRefronf ae&mrSm rvIyfr,Suf &amp;amp;amp;amp;amp;amp;yfaeqJjzpfonf/ wHcg;zGifhay;vdkufzdkU aumif;onfvm;[k pOf;pm;rdaomfvnf; olUajcoHavSum;qDra&mufrDyif uRefr ckwifay:jyefxdkifvdkufygonf/
uRefr i,fi,fwkef;u rdk;a&xJwGif puúLavSuav;wpfckvkyfNyD; a&xJcsvTwfvdkufpOf a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;ajrmif;xJrSm arsmygaeaom toD;ajcmufuav;wpfckudfk jrifí tMumMuD; &amp;amp;yfMunfhae vdkufzl;onf/ vSrf;q,f,lMunfhzdkU pdwfr0ifpm;cJhyg/
tckvnf; uRefr a&xJrSm wvdrfhvdrfharsmygaejcif;r[kwf[k b,fol Niif;EdkifrvJav/
('gav;uawmh 0wfxk&amp;amp;JU tqHk;rSm a&amp;amp;;cJhwJh &DuGef'dkuf (0rf;) &JU pm)
tjcm;aom uRefawmfrajymjyEdkifwJh cHpm;rIrsm; xlxlxJxJaomfvnf;aumif; yg;yg;vsvsaomfvnf;aumif;yg0ifaewJh pmpkvdkU cHpm;&amp;amp;ygw,f/ rdef;rwpfa,muf&JU txD;usefnudk a&amp;amp;;zGJUxm;ayr,fh a,mufsm;wpfa,muf&amp;amp;JU txD;usefn[mvnf; 'geJU odyfruGmovdkygyJ
Posted by Maw at 5:52 AM0comments
Unsafe abortion .... why..??? (ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဧ။် မ...